That's so good, right?: February 2016
ဒီနှစ် ခပ်စောစောမှာပဲ ရေခဲသေတ္တာတစ်လုံး အွန်လိုင်းကနေ ဈေးဦးပေါက်ပါတယ်။ လွတ်လပ်ပွင့်လင်းလာတဲ့နိုင်ငံမှာ အွန်လိုင်းဈေးဝယ် စနစ်နဲ့ရောင်းချခွင့်ရလာတာဆိုတော့ ဆိုင်ခန်းငှားခလည်းမကုန်သလို ပစ္စည်းအပေါ်အမြတ်သိပ်မတင်ဖြစ်တော့ အရောင်းအ၀ယ်က မဆိုးပါဘူး။ ငွေချေ ငွေထုတ်ကိစ္စအပြီးသတ် အဆင်ပြေတာကြောင့် ၀ယ်သူ ပစ္စည်းလာယူဖို့အဆင်ပြေအောင် ကျနော်သေချာစီစဉ် လိုက်ပါတယ်။ အချိန်ကိုက်ညှိပြီးနောက် လာယူတဲ့ ၂၅နှစ်လောက်ရှိမယ့် ကောင်ငယ်လေးရဲ့ အလန်းစား ကိုယ်ခန္ဓာအချိုးအဆစ်ကို ငေးမိသေးရဲ့။ ဒါပေမဲ့ ကောင်လေးက သူ့ကောင်မလေးနဲ့ တတွဲတွဲလာတာဆိုတော့ မျက်နှာပိုးသပ်ရတာပေါ့။ သူက အရပ်ရှည်ရှည် တော်တော်ကြည့် ကောင်းတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အချိုးအစားနဲ့ နောက်ပြီး ပါးသိုင်းမွှေးတွေရိတ်သင်ထားဟန်တူတဲ့ အစိမ်းရောင်သမ်းနေသော မေးရိုးခိုင်ခိုင်တွေ ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်။ အားကစားစွပ်ကျယ် ခပ်လျောလျောတစ်ထည်နဲ့အတူ အရောင်မွဲ ဂျင်းဘောင်းဘီတစ်ထည်ကို သူဝတ်ထားရော။ သူတို့ကားပေါ်ကို ရေခဲသေတ္တာ တင်ဖို့ ကူညီနေချိန်တလျှောက်လုံးလိုလို ကျနော် ကောင်ငယ်လေးကိုပဲ ငမ်းနေ မိတယ်။
ပစ္စည်းထားရာဂိုထောင်ထဲအလာမှာတော့ ကောင်လေးက သူ့စွပ်ကျယ် အနားစကို ရင်အုပ်နားမှာစုချည်ထားကာရောက်လာတာကြောင့် သူ့ဗိုက်သားပြင်တစ်ဝိုက်နဲ့ဆီးစပ်အထိပေါက်နေသော အမွှေးနုတွေကို ကျနော်ကောင်းကောင်းကြည့်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်ကြည့်နေ မှန်း သူသတိပြုမိတာသေချာသလောက်ရှိပေမယ့် ဘာမှမပြောဘဲ အပြုံးတစ်ချက်ပေးကာ ရေခဲသေတ္တာကိုသေချာစစ်ဆေးထုပ်ပိုးရော။ သူ့ကောင်မလေးက ကားရှိရာကိုပြန်သွားလိုက်ပြီဆိုတော့ ကျနော်က ရေခဲသေတ္တာကို သေချာချည်နှောင်ဖို့ကူညီရတာပေါ့နော်။
အလုံးစုံပြီးသွားချိန်မှာတော့ သူက ကျနော့်ကိုငွေသားနဲ့ ကျသင့်တန်ဖိုးကိုပေးချေကာ ကူညီတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါတယ်။ အိမ်ကိုရောက်ရင် ရေခဲသေတ္တာကို ကားပေါ်ကဘယ်လိုချရမလဲ သူမသိတော့ဘူး သူ့ကောင်မလေးက အလုပ်ဒီအချိန်သွားရတော့မှာ ဖြစ်ကြောင်း ညည်းတွားသလိုပြောသေးတယ်။ ကျနော့်အနေနဲ့ကတော့ ပစ္စည်းယူ ငွေချေပြီးရင် အခြားဝန်ဆောင်မှုတွေထပ်မံပေးလေ့ မရှိပေမယ့် သူ့ကိုကြည့်ရတာ အမှန်တကယ် အကူအညီလိုနေတဲ့ပုံပေါက်တာကြောင့် ကူညီပေးမယ့်အကြောင်းပြောလိုက်တော့ ကျေးဇူးစကား ထပ်ကာ ထပ်ကာဆိုကာ လိပ်စာကဒ်ပေးသွားပါတယ်။ သူ့အပြောအရတော့ နေတဲ့လိပ်စာက ကျနော့်နေရာနဲ့သိပ် မဝေးသလိုပါပဲ။ သူ မထွက်သွားခင် ကျနော့်လက်ကိုကိုင်ကာ လှုပ်ရမ်းနှုတ်ဆက်ချိန်မှာတော့ မကြာခင်မှာတွေ့ကြမယ့်အကြောင်း သေချာပြောပါရဲ့။ သူတို့ ထွက်ခွာသွားပြီး လေးငါးဆယ်မိနစ်လောက် အိမ်တစ်ဝိုက်အလုပ်ရှုပ်လိုက်ရင်း ခဏတော့စောင့်လိုက်တာပေါ့။ ပြီးမှ ပေးခဲ့တဲ့လိပ်စာအတိုင်း ကားလေးမောင်းပြီးလိုက်သွားလိုက်ပါတယ်။
အိမ်ရဲ့ စဉ်ဝင်အောက်ကို ကားအသာရပ်ရင်း ဟိုသည်ကြည့်လိုက်တော့ ရေခဲသေတ္တာက တံခါးအ၀မှချထားလျက်သား။ ခပ်ဟဟ ပွင့်နေတဲ့ တံခါးရွက်နား ကျနော် အသာလျှောက်သွားလိုက်ရင်း တံခါးကိုအသာခေါက် အသံပေးလိုက်တယ်။ တံခါးခေါက်သံပေါ် လာတာနဲ့တပြိုင်နက် အိမ်ထဲကိုဝင်ခဲ့ပါလို့ သူ့အော်ခေါ်သံကိုကြားလိုက်ရရော။ အိမ်ထဲအ၀င်က ဖိနပ်ချွတ်နား ကျနော်ရပ်နေမိတဲ့ စက္ကန့်အနည်းငယ်အကြာမှာ ခပ်လျောလျော စွပ်ကျယ်၊ ဘောင်းဘီတိုတစ်ထည်စွပ်လျက် သူပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ သူက ဂျင်း ဘောင်းဘီကို ချွတ်ထားမိရခြင်းမှာ လျှော်မယ့်အ၀တ်ပုံထဲက အိမ်နေရင်းဝတ်ဖို့ဘောင်းဘီတစ်ထည်လောက်မွှေနေလို့ဆိုပဲ။ ကျနော်လည်း အချိန်ရှိသလောက် သူ့ကိုတစ်ချိန်လုံး ငမ်းနေတာဆိုတော့ သူလည်းသူ့ကိုယ်သူကြည့်ကောင်းအောင်နေထိုင်ဖို့ကြိုးစားမိမယ်နဲ့တူတယ်။ ဟိုသည်လုပ်နေတာကို သူခဏရပ်ကာ ကျနော့်ကိုကြည့်လိုက်ရင်း ‘ဆောရီးဘော်ဒါ…ခင်ဗျားနာမည်ကို အခုထိကျုပ်မသိသေးဘူး၊ ကျုပ်နာမည်က နန္ဒပါ စကားမစပ်’ မိတ်ဆက်စကားဆိုတယ်။ ကျနော်တို့နှစ်ယောက်သား အချက်အလက်အပြန်အလှန်ဝေမျှပြီးနောက် သူ ကွာတားဘောင်းဘီတစ်ထည်ကို ကောက်စွပ်လိုက်တယ်။ တစ်ချိန်လုံးလိုလို ကျနော့်အချိန်တွေယူသုံးသလိုဖြစ်နေမိတဲ့အတွက် တောင်းပန်စကားခဏ ခဏဆိုနေတာပါ။ ဒါပေမဲ့ သူဘာကြောင့် ၀တ်စုံပြည့်ပြန်ဝတ်ပြီး ကျနော့်နားမတ်မတ်ရပ်ဖို့ကြိုးစားနေလဲ သံသယ ၀င်မိပါတယ်။
ကျနော်တို့နှစ်ယောက်သား စကားစပ်မိစပ်ရာ အဆန်းတကြယ်ဖြစ်တယ်ထင်တဲ့ကိစ္စတွေအကြောင်း စကားစမြည်ပြောဖြစ်ကြတယ်။ ပြီးတော့ ရေခဲသေတ္တာကိုနေရာချနေချိန်တလျောက် သူက ကို့ရိုးကားယားနိုင်တဲ့မေးခွန်းအချို့ကျနော့်ကိုမေးပါတယ်။ ကျနော်သာ ကောင်မလေး ရည်းစားတစ်ယောက်ရှိခဲ့ရင် ကောင်မလေးရှိရင် စသဖြင့် မိန်းကလေးရည်းစားကိစ္စကိုပဲ ထပ်ကာ ထပ်ကာ ပြောနေတယ် လေ။ ကျနော် အပြန်အလှန် ဘာစကားတွေဆိုနေမိကြမှန်း သတိမထားမိပေမဲ့ သူ့အ၀တ်မဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေကို ရပ်ကြည့်နေရ တာကို ပျော်တယ်။ ရေခဲသေတ္တာကို သယ်မဖို့အသင့်ဖြစ်ပြီလား သူမေးတော့မှ ခပ်သေးသေး ကော်ဇောလေးပေါ်ရပ်မိနေတဲ့အဖြစ် သတိ ကပ်မိတယ်ဗျ။ အတန်ငယ်လေးတဲ့ ရေခဲသေတ္တာကို လှေကားကနေတစ်ဆင့်မြင့် အခန်းထဲသယ်မရမှာ အဆင်ပြေမလားကျနော်တွေးမိ နေပေမဲ့ နောက်ဆုံးတော့လည်း ထားမယ့်နေရာအရောက် သေချာစွာထားပေးလိုက်နိုင်ပါတယ်။
နှစ်ယောက်သားရဲ့အခြေအနေက ပူအိုက်သောရာသီမဟုတ်ပေမဲ့ ချွေးတွေလည်းရွှဲ မောဟိုက်သလိုလဲပန်းကြတော့ ထမင်းစားစားပွဲက ထိုင်ခုံတွေမှာ ခြေပစ်လက်ပစ်မှီထိုင်လိုက်မိကြပါတယ်။ အဆုံးသတ်မှာတော့ သယ်ယူပို့ဆောင်မှုနဲ့အတူ အကူအညီပေးဖို့တောင်းဆို မိတဲ့အတွက် သူက တောင်းပန်စကားဆိုပါရော။ ကျနော်ကရပါတယ် ကူညီရမှာပေါ့လို့ပြန်ပြောခဲ့တာပေါ့နော်။ သူ လတ်တလောလူငယ် တွေ စိတ်ဝင်စားတတ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို blar blar ပြောလိုက်မေးလိုက်ဆက်လုပ်နေပါတယ်။ နောက်တော့ သူ့ကိုကူညီမှု အတွက် ဘယ်လို ကျေးဇူးပြုရမယ်ဆိုတာသိချင်သလို သိတတ်မှုကိုလည်းပြသချင်ကြောင်းပြောတယ်လေ။ ကျနော်ဘာမှမပြောဖြစ်တဲ့ ခဏမှာ ယင်ကောင်တစ်ကောင်က တ၀ီဝီနဲ့ ရစ်ဝဲပျံသန်းလာရာ သူက လက်နဲ့လှမ်းအရိုက် ကျနော့်ပေါင်ခွဆုံနား အံကျအုပ်ကိုင်မိသား ဖြစ်ကရော။ ကျနော်ဝတ်ထားတဲ့ဘောင်းဘီတိုက အသားနဲ့ကပ်နေတာဆိုတော့ အတွင်းသားအခြေအနေတစ်ခုခုပြောင်းလဲရင်သိသာတဲ့ အမျိုးဖြစ်တာကြောင့် အုပ်ကိုင်ထားသလိုဖြစ်နေတဲ့ သူ့လက်နွေးနွေးအစွမ်းနဲ့ ပေါင်ကြားက ညီဘွားက ခေါင်းထောင်ထချင်သလိုနိုးထ လာပါတယ်။ မသိမသာ ခပ်လျော့လျော့ ကျနော်ထိုင်မိလိုက်ရင်း နှုတ်ဖျားက ခပ်တိုးတိုးညည်းညူမိပြန်တော့ သူက ဘာတွေများစိတ်ရှုပ် နေလို့လဲမေးလာပါတယ်။
သူ့လက်ကိုမဖယ်ဘဲ အချိန်ဆွဲနေတာကြောင့် အချိန်တွေတောင်အသက်ကြီးလာကြသလို ခပ်ပါးပါးဂျင်းသားနောက်က ကျနော့် ညီဘွားကလည်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကျောက်သားဆိုင်ဖြစ်လာပါတယ်။ ကျနော်ချက်ချင်းဆိုသလို ဘာမှမလုပ်ဖြစ်ပေမဲ့ ခဏသောအချိန်မှာ တော့ ခပ်လျော့လျော့ စွပ်ကျယ်ဝတ်ထားတဲ့ သူ့ဂျိုင်းကြားကနေ ကျောပြင်လေးကို လက်နဲ့အသာလမ်းပွတ်သပ်မိရဲ့သားဖြစ်ရပါတယ်။ ကျနော်တို့နှစ်ဦးသား စကားလက်ဆုံကျဖို့ လမ်းကြောင်းလည်းမရှာဖြစ်သလို အထူးအထွေမပြောဖြစ်ဘဲ ငြိမ်နေမိကြတာ သူက ဘီယာ သို့မဟုတ် တစ်ခုခုသောက်မလားလို့ ရုတ်ခြည်းမေးလာချိန်အထိပါပဲ။ ဒီအချက်လည်းရရော ကျနော်က မတ်တပ်ထရပ်လိုက်မိရင်း ဘီယာတစ်ခွက်သောက်ရတာကောင်းမှာမှန်ပေမဲ့ အခြားတစ်ခုခုသောက်ရရင်ကောင်းမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ သူက အမြုပ်များများထွက် တဲ့ ဘီယာတံဆိပ်အသစ်တစ်ခုလောက် သောက်ကြတာပေါ့တဲ့ ရယ်ကျဲကျဲနဲ့ပြန်ပြောတယ်ဗျ။ ကျနော်က အသောက်ကြမ်းတယ်နော်လို့ နောက်လိုက်တယ်။ သူက သဘောတကျရယ်မောကာ ကျနော်တို့နှစ်ဦး အတွင်းဘက်ပိုင်းကိုသွားသင့်တဲ့ဟန် အမူအယာသူကပြတော့ ပိုမိုသီးသန့်ဆန်တဲ့နေရာကို လိုက်သွားလိုက်ပါတယ်။
ကျနော် နန္ဒသွားတဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားပြန်တော့ သူက မီးဖိုချောင်ထဲပြန်ဝင် ဘီယာတစ်ပုလင်းဆွဲကိုင်ယူဆောင်လာတယ်။ ကျနော်က စာအုပ်စင်နားကို ကျောပေးရပ်နေတဲ့အနေအထားမှာ သူက ကျနော့်ဆီတည့်တည့်လျှောက်လာရင်း မျက်နှာခြင်းဆိုင်မှာ ရပ်လိုက်တယ်။ တဖြည်းဖြည်းချဉ်းကပ်လာတဲ့ သူ့ကိုကြည့်ရင်းနဲ့ကို ကျနော်ရင်ခုန်လာမိပါတယ်။ သူတစ်ပါးရဲ့ချွေးနံ့ကိုယ်နံ့ဟာ မခံမရပ်နိုင်လောက် အောင် မနံစေကာမူ သည်းမခံတတ်တဲ့ ကျနော် သူ့ချွေးနံ့ ကိုယ်နံ့ခပ်သင်းသင်းရဲ့ဆွဲဆောင်မှုနောက် တိမ်းမူးလာသလိုပဲ။ နှုတ်ခမ်းလေး ခပ်ဟဟအနေအထားဖြစ်နေတဲ့ ကျနော့်မျက်နှာအနားကို သူ့မျက်နှာအားငုံ့ကိုင်းလာရင်း အနမ်းပေးဖို့ကြိုးစားလာချိန် သူစိတ်ဘယ် လောက်ထန်နေမယ်ဆိုတာ သိချင်တာကြောင့်လက်ကိုရှေ့ဆန့်ထုတ်ရင်း သူ့ငပဲကိုဘောင်းဘီအပေါ်ကနေ အုပ်ကိုင်လိုက်ပါတယ်။ သူက ရုန်းကန်ခြင်း နောက်ဆုတ်သွားခြင်းမရှိဘဲ ကျနော့်အကိုင်ကိုသာယာသလို မျက်နှာမှာအပြုံးတွေပေါ်လာရင်း နှုတ်ဖျားကနေလည်း ညည်းညူမှုပြုပါတယ်။ ကျနော်တို့နှစ်ဦးသား တထပ်တည်းကျမတတ်မျက်နှာခြင်းဆိုင်တိုးကပ်ရပ်နေကြစဉ် သူ့ကိုမေးလိုက်မိတယ် ဒီအချိန် ခင်ဗျားကောင်မလေးလျှောက်ဝင်လာလို့တွေ့သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့။ သူက ရယ်မောလိုက်ကာ ဒီလိုအနေအထားနဲ့ ကပ်ရပ်နေကြတာကို သူ့ကောင်မလေးတွေ့သွားရင်လည်း ဖြေရှင်းချက်ပေးလို့ရမှာပါတဲ့။ သူတစ်ယောက်တည်း လက်သမားလုပ်နေစဉ် ကောင်မလေးလာတဲ့အချိန်နဲ့ အံ့ကိုက်ဖြစ်သွားရဖူးတယ်ဆိုပဲ။ ကျနော် သူ့ဘောင်းဘီအနားကိုဆွဲကိုင်လိုက်ပြီး ဒူးခေါက်ကွေးထိလျှောချ လိုက်ပါလား ပစ္စည်းဘယ်လောက်ရှိလဲကြည့်ချင်လို့လို့ ခပ်တိုးတိုးအနားကပ်ပြောလိုက်တယ်။ သူက ဘောင်းဘီကို အသာအယာပဲ အောက်ကိုဆွဲချလိုက်တော့ ဘယ်လောက်များမာတောင့်နေမလဲဆိုတာ သူ့အတွင်းခံဘောင်းဘီပေါ်ကနေ ကျနော်တချက်ငေးကြည့် လိုက်တယ်။ တဖန်သူက ကျနော့်အပေါ်ဘောင်းဘီကို ဆွဲချွတ်ချလိုက်တော့အရည်ကြည်အချို့စို့ထွက်ခြင်းကြောင့် အတွင်းခံဘောင်းဘီ ၀ယ် အနည်းငယ်စိုစွတ်နေတာကို မြင်သွားရော။
ကျနော့်ဘောင်းဘီကိုဆွဲချပြီးပြီးခြင်း နန္ဒတစ်ယောက် အတွင်းခံဘောင်းဘီထဲကနေ အတင်းကုန်းရုန်းထနေတဲ့ငပဲကို စတင်ပွတ်သပ် တော့တာပါပဲ။ ငပဲခေါင်းလေးကို အသာတို့ထိလိုက် ဥတွေကိုလက်နဲ့အသာဆုပ်ကိုင်လိုက်နဲ့ပေါ့။ ကျနော်ကတော့ သူ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ ပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်မိပါတယ်။ အတွင်းခံဘောင်းဘီလေးကိုပွတ်သပ်လိုက် ဆီးခုံနဲ့ ဗိုက်သားပြင်တလျောက်ရှိ အမွှေးနုလေးတွေကိုတို့ထိ လိုက် နောက်တစ်ခါ မာတောင့်သလိုဖြစ်နေတဲ့ သူ့နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို ကလိလိုက်ပေါ့လေ။ ကျနော့်မျက်နှာအနားငုံကိုင်းလာတဲ့ သူ့မျက်နှာအနီးတိုးကပ်လိုက်ကာ ကျနော်တို့နှစ်ယောက်သား မနက်ဖြန်ဆိုတာမရှိတော့တဲ့အတိုင်း အနမ်းစစ်ပွဲဆင်နွှဲကြပါတယ်။ ကျနော်တို့နှစ်ဦးသားတွေရဲ့ လျှာတွေဟာ တစ်ယောက်အာခံတွင်းထဲတစ်ယောက် လေ့လာရေးလုပ်သလို နေရာအနှံ့စမ်းသပ်ကြပါ သေးတယ်။ နမ်းနေကြတဲ့တချိန်လုံးလိုလို နှစ်ဦးသားခန္ဓာကိုယ်ဟာ ကွာဟခြင်းမရှိ ပူးကပ်နေကြတာ ဘယ်လိုမှတားဆီးမရကြပါဘူး။ မိနစ်အနည်းငယ်ကြာပြီနောက် နောက်ကိုအသာခွာရပ်လိုက်ကြတော့ သူက ကျနော်တို့တွေ အိပ်ခန်းတစ်ခန်းထဲသွားကြရအောင်လို့ အကြံပြုပြောတာကြောင့် သူဦးဆောင်တဲ့နောက်ကို ကျနော်လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။
နန္ဒက ကျနော့်ကို အိပ်ခန်းတစ်ခုထဲခေါ်ဆောင်သွားပြီးနောက် ရပ်တန့်လိုက်ကာ ကျနော့်ဘက်ကိုပြန်မျက်နှာမူရပ်လိုက်ရင်း သူ့ကို ကျောပေးရပ်လိုက်ဖို့ပြောပါတယ်။ သူပြောတဲ့အတိုင်းရပ်လိုက်တော့ နောက်ပါးကနေ သိုင်းဖက်လာတဲ့ လက်မောင်းအစုံဟာ ကျနော့် တကိုယ်လုံးကို ရစ်သိုင်းလိုက်သလိုပဲ ခံစားရပါတယ်။ ကျနော်မျက်နှာမူရာအရပ်က အ၀တ်လဲတဲ့အခါကြည့်တဲ့မှန်ချပ်နဲ့ တူရှုအရပ် ဆိုတော့ ကျနော့်ကိုယ်လုံးကို သန်မာနွေးထွေးလှသော လက်အစုံကဘယ်လိုဖက်တွယ်ပွတ်သပ်နေသလဲဆိုတာမြင်နေရသလို ရင်လည်း ပိုခုန်မိသလိုပါပဲ။ ဖက်တွက်ထားတဲ့လက်နှစ်ဖက်ထဲက တစ်ဖက်ဟာ ပေါင်ခွဆုံက မာတောင့်နေတဲ့ ကျနော့်ငပဲကိုဘောင်းဘီအပေါ်ကနေ ပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်နေသလို အခြားတစ်ဖက်ကလည်း ဗိုက်သားပြင်ကို အသာအယာတို့ခေါက်နေပါတယ်။ ဘယ်လောက်စိတ်လှုပ်ရှား စရာကောင်းသလဲဆိုတော့ သူ့လက်တွေက ကျနော့်ငပဲကိုဆော့ကစားထိတွေ့နေသလို မာတောင့်နေတဲ့သူ့ငပဲကနောက်ဖြားကနေ ထောက်လှမ်းရေးလုပ်နေပါတယ်ပေါ့။ သူ့လက်အစုံဟာ ကျနော့်ဘောင်းဘီမျှော့ကြိုးကနေအတွင်းထဲလျှိုဝင်သွားကာ မာတောင့်နေတဲ့ ငပဲကို အားရပါးရဆုပ်ကိုင်လိုက်သလို အတွင်းခံဘောင်းဘီတစ်ခုလုံးချွတ်ပစ်လိုက်ဖို့သူကပြောရော။ ကျနော့်ငပဲကို အသာအယာထက် အောက်ကစားသလို ကွမ်းသီးခေါင်းထိပ်လေးကို သူပွတ်သပ်ကစားရင်း နှစ်ဦးသားပူးကပ်မတ်တပ်ရပ်နေကြတာ အချိန်အတော်ကြာ ပါတယ်။ ကျနော်ကလည်း လက်နောက်ပြန်စမ်းကာ နန္ဒအတွင်းခံထဲက မာနေတဲ့အသားချောင်းကြီးကို ထိတွေ့ခံစားမိရော။ ကျနော် ဖက်တွယ်ထားတဲ့ သူ့လက်အစုံကြားကနေ အသာလူးလွန့်လိုက်ကာ သူ့ဖက်မျက်နှာပြန်မူလိုက်ရင်း အငမ်းမရ နှုတ်ခမ်းခြင်းတေ့ အနမ်းကြမ်းကြမ်းပေးမိတယ်။
သူက ကျနော့်ကို အိပ်ရာပေါ်ကို အသာတွန်းလှဲလျောင်းစေရင်း ပက်လက်ဖြစ်နေတဲ့ ကျနော့်အပေါ်ငုံ့ကိုင်းလာကာ ဗိုက်သားပြင်အနှံ့ တို့ထိတို့ထိ နှုတ်ခမ်းသားများဖြင့်နမ်းကာ ဆီးစပ်က ငပဲထိငုံ့ဆင်းသွားပါတော့တယ်။ ကျနော့်ငပဲအတံတလျောက်ကို အရင်ဆုံးလျာနဲ့ လျက်ပြုပြီးနောက်မှာမှ စိုစွတ်စပြုနေတဲ့ ငပဲခေါင်းလေးကို အသာထိတယ်။ သူ့အာခံတွင်းထဲ မသွင်းခင် ကျနော့်ငပဲထိပ်ပိုင်းအနှံ့ကို တပြွတ်ပြွတ်အနမ်းပေးပြန်ရော။ ပြီးမှာ လျောကနာဆိုသလို သူ့လည်မျိုထဲထိတိုင် သွင်းချလိုက်တာ ကျနော့်ရင်ထဲဟာဆင်းသွားရသလို နှုတ်ဖျားကနေ မနေနိုင်စွာ ညည်းညူမိပါတယ်။ သူ့နှုတ်ဖျားကလည်း ကြေနပ်မိန့်မူးသံထွက်လာသလို ကျနော့်ငပဲထိပ်ခေါင်းလေးကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ စုပ်ပြုနေသဗျ။ တလှုပ်လှုပ်ဖြစ်နေတဲ့ သူ့ဦးခေါင်းကဆံပင်တွေရဲ့ရွေ့လျားမှုကိုငေးပြီး စဉ်းစားမိရတာက သူတစ်ပါး ကို ဘယ်လိုသာယာအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတာ သူသိနေတာက အံ့သြစရာပဲလို့။ အိပ်ယာပေါ်မှာ အသာလှဲလျောင်းကာ မိနစ်အနည်း ငယ်လောက်တော့ ကျနော်သာယာနေမိပါတယ်။ နန္ဒတယောက် ကျနော့်ငပဲကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ စုပ်ပြုနေတာကို စောင့်ကြည့်နေရ တာ ကျနော်သဘောကျပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ငပဲကိုတို့ထိရတဲ့အရသာဘယ်လိုရှိသလဲ သိချင်လာတာကြောင့် သူ့ဦးခေါင်းကိုလက်နှစ် ဖက်နဲ့ထိမ်းကိုင်လိုက်ကာ ကျနော့်ငပဲကို သူ့ပါးစပ်ထဲကနေ ဆွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်။ သူ့အကြည့်မျက်ဝန်းတွေက ရီဝေနေသလို ကျနော့် နှုတ်ခမ်းတွေကို နမ်းဖို့ကြိုးစားလာချိန်မှာ မတ်တပ်ထရပ်လိုက်မိတယ်။ ပြီးတော့ သူ့ကိုရင်ချင်းအပ်ထွေးဖက်လိုက်ကာ လက်အစုံက တင်းရင်းနေတဲ့ သူ့တင်ပါးအစုံကိုဖျစ်ညှစ်လိုက်ရင်း အကွဲကြောင်းလေးတလျောက် လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ တို့ထိကစားမိတော့ ခပ်တိုး တိုး မိန့်မူးသံ သူ့နှုတ်ဖျားကထွက်လာပါရော။ ကျနော်လည်း သူ့ငပဲကိုတို့ထိကစားချင်ကြောင်းပြောလိုက်တော့ နှစ်ယောက်သား 69 အနေအထား အိပ်ယာပေါ်လှဲလျောင်းလိုက်ဖို့သူက အကြံပေးပါတယ်။
အတင်းရုန်းကန်ထွက်နေတဲ့ သူ့ငပဲကိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးဖို့ အတွင်းခံဘောင်းဘီကို သူဆွဲချွတ်လိုက်ချိန်မှာတော့ ဘန်းကနဲ တံခါးကိုဖွင့်ချ လိုက်တဲ့အတိုင်း လေထဲကို တန်းထွက်လာတာလန့်တောင်လန့်တယ်။ ကျနော့်ငပဲထက်သူ့ပစ္စည်းကပိုရှည်ပါတယ်။ ၆လက်မခွဲလောက် များရှိမလားဘဲ။ ထိပ်အရေပြားဖြတ်တောက်ထားပြီး နည်းနည်းတုတ်သယောင်ထင်ရပါရဲ့။ သူ့ရွှေဥတွေကော ဆီးခုံမွှေးတွေကိုရော ခပ်ပါး ပါးရိတ်ထားတာကြောင့် မြင်ကွင်းကရှင်းနေသလိုပဲ။ ကျနော်သူ့ကိုယ်လုံးကို ဆွဲဖက်ပစ်လိုက်တယ် လွတ်ထွက်သွားမှာကိုစိုးရိမ်မိတဲ့ အတိုင်းပေါ့နော်။ အ၀တ်မပါတဲ့ ကျနော်တို့နှစ်ယောက်သားကိုယ်ခန္ဓာတွေ ဒီအတိုင်းအရေပြာခြင်းထိတွေ့ရတဲ့ဖီလင်က တကယ်အလန်း စားပါပဲ။ သူ့အနမ်းတွေဟာ ကျနော့်နှုတ်ခမ်းဖျားဝယ် ပိုမိုအသက်ပါလာချိန်မှာတော့ ကျနော်သူ့ကို အိပ်ယာပေါ်အသာတွန်းကာလှဲ လျောင်းစေလိုက်ပါတယ်။
သူ ဦးခေါင်းပြုလှဲလျောင်းနေတဲ့ဘက်ကို ကျနော် ခုတင်ဘေးကနေ၀ိုက်ကာ လျှောက်သွားလိုက်ရင်း သူ့နဖူးကိုအနမ်းတစ်ချက်ပေးလိုက် ပါတယ်။ ပြီးတော့ နှုတ်ခမ်း နောက်တစ်ခါ ရင်အုပ်ပေါ်က ခပ်ထင်းထင်းပေါ်နေတဲ့ နို့သီးခေါင်းလေးတွေ ….ပြီးရင် သူ့ဗိုက်သားပြင် တလျောက်နဲ့ အဆုံးသတ် ငပဲခေါင်းကို ကျနော်အနမ်းတွေဝေလိုက်တယ်။ သူ ကျနော့်ငပဲကိုလက်နဲ့ဆွဲကိုင်လိုက်သလို အမွှေးအနည်း ငယ်ရှိတဲ့ ရွှေဥတွေကို ငုံစုပ်ပါတော့တယ်။ ကျနော်လည်း လျာကိုအပြားလိုက်ထားကာ သူ့ငပဲအတံတလျောက်လျက်ပြုလိုက်သလို အမွှေးရိတ်သင်ထားတဲ့ ရွှေဥတွေကို တစ်လုံးခြင်းလျက်ပစ်တယ်ပေါ့။ သူ့ကိုယ်နံ့က တကယ်အဆင်ပြေတယ် ချွေးနံ့မနံသလို အခြားအနံ့ အသက်လည်းကင်းတာကြောင့် အမွှေးနုတွေရှိတဲ့ သူ့ပေါင်ခြံတလျောက်ကို အနမ်းတွေကို ပေါပေါများများပေးဖြစ်ပါတယ်။ နန္ဒက ကျနော့်ရွှေဥတွေကို အချိန်တော်တော်ကြာ စုပ်ပြုနေရာက ကျနော့်ငပဲကိုသူ့အာခံတွင်းထဲ နောက်တဖန်ရောက်သွားစေပြန်ရော။ ကျနော်လည်း အားကျမခံ သူ့ငပဲကို ကျနော့်ပါးစပ်ထဲထည့်လိုက်ပြန်တော့ အရည်ကြည်အချို့ စို့ထွက်စပြုနေတာကိုသိလိုက်ရသလို ပါးစပ်ဟနိုင်သလောက်ကြိုးစားဟကာ သူ့ငပဲကိုထိန်းထားနိုင်ဖို့လုပ်လိုက်ပါတယ်။
ပါးစပ်ထဲပြည့်နေသလို ခံစားရပြီး သူ့ပစ္စည်းကို အသေအချာပြုစုနိုင်ဖို့ အချိန်ကြာကြာယူပြီးပြင်ဆင်ရပါတယ်။ သူ့ငပဲခေါင်းကိုတော့ ကောင်းကောင်း ကစားပေးတာပေါ့။ လျှာဖျားလေးကိုအသာထုတ်ရင်း သူ့ငပဲခေါင်းထိပ်လေးကို တို့ထိကစားရတာ ကျနော်သဘောကျ တယ်။ ပြီးတော့ အရည်ကြည်လေးတွေစို့လာတာကိုခံစားရင်းဆိုပါတော့။ ခဏအကြာမှာတော့ ကျနော် နန္ဒရဲ့ခြေထောက်တွေကိုခြဲကိုင် ကွေးတင်လိုက်ရင်း အမွှေးနုအနည်းငယ်ရှိနေတဲ့ တင်အကွဲကြောင်းတလျောက်နဲ့ ခရေ၀ကိုကောင်းကောင်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။ တင်အကွဲကြောင်းထဲကို တံတွေးအချို့ ကျနော်အစက်ချလိုက်ပြီးနောက် လက်ခလယ်လေးနဲ့ခရေ၀တ၀ိုက်ကို ကောင်းကောင်းလေးပွတ် သပ်ကလိလိုက်တယ် ရွှဲရွှဲစိုတဲ့အထိပေါ့နော်။ နန္ဒတစ်ယောက် အပေါ်ကအုပ်မိုးထားတဲ့ ကျနော့်ကိုယ်လုံးအောက်ဝယ် တွန့်လိမ်နေပြီး နှုတ်ဖျားကလည်း အနည်းငယ်ပိုမိုညည်းတွားလာခဲ့ပါတယ်။ အာ….သူ့သွားတွေက ကျနော့်ရွှေဥတွေကို ခပ်ဖွဖွလေးကိုက်ပေးလာတော့ စိတ်ထဲက မရိုးမရွခံစားချက်တွေဟာ ပိုမိုပြင်းထန်လာပါရော။ ကျနော် လက်ခလယ်လေးနဲ့ပွတ်သပ်ကလိနေတဲ့နေရာကို မျက်နှာလေး အပ်ရင်း လျှာဖျားလေးနဲ့ထိုးဆွဖို့ကြိုးစားလိုက်ပါတယ်။ သူ့နှုတ်ဖျားက ညည်းတွားသံဟာ လှိုက်မောသံအပြည့်နဲ့ ကျယ်ကျယ်လောင် လောင်ထွက်လာတယ်။ သူ့ခရေ၀တစ်ဝိုက်ဟာ ကောင်းကောင်းစိုစွတ်စပြုလာတော့ ကျနော် သူ့ရွှေဥနဲ့ လိင်တံဘက်ကိုပြန်ပြီးဦးလှည့် လိုက်မိတယ်။
ကျနော် 69 အနေအထားကနေ နန္ဒနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်အနေအထားဖြစ်အောင် ပြန်နေလိုက်ရင်း နှုတ်ခမ်းခြင်း အချိန်အတော်ကြာ နမ်းမိကြတယ် ခင်ဗျ။ သူ့ကို ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲလို့ ကျနော်ကမေးလိုက်တော့ anal sex ကိုလုပ်ဖို့စိတ်ထဲမသိုးမသန့်ဖြစ်မိပေမဲ့ ပြီးတဲ့အထိ အပြန်အလှန် စုပ်မှုတ်တာကိုတော့ ဆက်လုပ်ချင်ကြောင်းဖြေပါတယ်။ ကျနော်ကတော့ နန္ဒနဲ့ မမျှော်လင့်ဘဲ ဒီလိုဇာတ်လမ်း ခင်းနေရတဲ့အပေါ် စိတ်အားထက်သန်မိသလို သူ့ငပဲကြီးကိုလည်း သဘောကျမိတယ်။ သူ့ငပဲကိုဆက်လက်ပြုစုပေးဖို့တောင်းဆိုလာ တော့ ကျနော် တုန့်ဆိုင်းမှုမရှိဘဲ ခပ်ချဲချဲကားထားတဲ့ သူ့ပေါင်နှစ်ခုကြား ခေါင်းအပ်လိုက်ကာ သူ့ငပဲခေါင်းကို တပြွတ်ပြွတ်စုပ်ပြုလိုက် ပါရဲ့။ သူ့ပေါင်နှစ်ချောင်းကို အနည်းငယ်ပြန်စေ့လိုက်ပြန်တော့ အမွှေးနုတွေများတဲ့ သူ့ပေါင်သားတွေနဲ့ ကျနော့်ဦးခေါင်းတစ်ဖက်တချက် ထိတွေ့မှုကို သဘောကျမိရပါတယ်။ အရမ်း အသည်းယားရင်ခုန်တယ်ဗျာ။ သူ့လက်တွေဟာ တဖြေးဖြေး သူ့ငပဲကိုဆုပ်ကိုင်လိုက်ကာ ကျနော့်ဆီကလုယူသွားပြီး ကစားနေတာကြောင့် ငပဲထိပ်ခေါင်းလေးကိုပဲ ကျနော့်မှာ အပိုင်းစားရပါတော့တယ်။ သူ့ငပဲကို ခပ်ဖြေးဖြေး လက်ကစားနေချိန်တလျောက်မှာ ကျနော်က သူ့ငပဲခေါင်းလေးကို နှုတ်ခမ်းသားတွေနဲ့ အသာအယာပွတ်သပ်လိုက် အာခံတွင်းထဲငုံလိုက် ဆက်လုပ်တာပေါ့နော်။ တချိန်လုံးလိုလို သူ ဘယ်လိုကြိုက်ကြောင်း ကျနော့်ပြုစုမှုအပေါ် အလွန်သဘောကျကြောင်း တတွတ်တွတ်အော် ညည်းပြောဆိုနေပါတယ်။ ဘယ်လိုတွေ ညည်းတွားနေတယ် မိန့်မူးလူးလိမ့်နေတယ်ဆိုတာ ကျနော်သတိမထားတော့ဘဲ သူ့ငပဲကိုပဲ အာရုံစိုက်ကာ အလုပ်များနေလိုက်တာမှာ ဇာတ်သိမ်းကာနီး ခြေထောက်တွေ တဆတ်ဆတ်တွန့် အရှိန်တက်လာချိန်ရောက်မှ လုပ်လက်စကို လျော့ချလိုက်တယ်လေ။
သူ့ပစ္စည်းသူကိုယ်ထားတဲ့လက်ကို ကျွန်တော်လုယူလိုက်ပြီး အားရပါးရကိုင်ကာ ကစားမိသလို ငပဲတစ်ခုလုံးလည်း ပါးစပ်ထဲအပြည့် ရောက်အောင် အထုတ်အသွင်းလုပ်ပစ်လိုက်တယ်။ နန္ဒတစ်ယောက် အော်ဟစ်ညည်းညူသံ မထိန်းနိုင်မသိမ်းနိုင်ဖြစ်လာသလို ကျနော့်လက်ထဲက ငပဲကိုပြန်လုသွားကာ ခပ်သွက်သွက် လက်ကစားပါတော့တယ်။ ကျနော့်ပါးစပ်ထဲ သူ့သုက်ရည်တွေပန်းထည့်တာ သဘောကျ ခံစားချင်ကြောင်း ကျနော်ပြောလိုက်ချိန်မှာတော့ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာ အနည်းငယ်တွန့်တွန့်သွားသလိုဖြစ်ကာ ချွဲပစ်များပြား သော အရည်ဖြူတွေဟာ ကျနော့်ပါးစပ်ထဲကို မာရသွန်ပြေးလာပါရော။ သူ ပန်းထည့်သမျှအကုန် ကျနော့်ပါးစပ်ထဲမထိန်းနိုင်စွာဖြင့် သူ့လိင်တံပေါ်ကိုပြန်လျှံကျစီးဆင်းကုန်ပါတယ်။ သူ့ငပဲတချောင်းလုံး သန့်ရှင်းသွားတဲ့အထိ ကျနော်လျှာနဲ့ပြန်လျက်ပြုပေးလိုက်ပြီး ငပဲခေါင်းလေးကို တပြွတ်ပြွတ်စုပ်ပေးလိုက်တော့ သူ့တစ်ကိုယ်လုံး တုန်ခါသွားတာများ အားရစရာ။ နှစ်ဦးသားအကြည့်ခြင်းဆုံ ခဏငြိမ်နေပြီးမှ ဒီတစ်ခါ ကျနော့်အလှည့်ဖြစ်ကြောင်း သူ့ကိုပြောလိုက်တယ်။
ကျနော် အိပ်ရာပေါ်ကို ပြန်လှိမ့်ချလိုက်ပြီး ပက်လက်ကလေးလှန် ဒူးလေးထောင်ပြီးနေလိုက်တော့ နန္ဒက ကျနော့်ပေါင်တံနှစ်ချောင်းကို အသာဖြဲကာ ငပဲကိုလက်နဲ့အသာကိုင်ပါတော့တယ်။ ဒီအဆင့်မှာတော့ ကျနော့်ငပဲခေါင်းလေးဟာ အရည်ကြည်များဖြင့် တကယ့်ကိုရွှဲ နေ ပြီးဖြစ်သလို အသံတွေကျယ်ကျယ်လောင်လောင်ထွက်လာတဲ့အထိ ခပ်မြန်မြန်လေးပဲ ပူနွေးနေတဲ့သူလျှာလေးနဲ့ရစ်သိုင်းကာ စုပ်ပြုမှုကြောင့် ရင်ပိုခုန်ရပါရော။ အစက ကျနော့်ရွှေဥတွေကို တစ်လုံးခြင်းပြန်ငုံစုပ်နေသေးသလိုလိုနဲ့ လိင်တံတလျှောက် လျှာကိုအပြား လိုက်ကပ်ကာ လျက်ပြုနေပြန်တာကြောင့် စိတ်ထဲ တကယ့်ကို အားမလိုအားမရ ကလိကလိဖြစ်မိပါတယ်။ အိုး…..တကယ့်ကို ရုပ်ရှင်အနှေးပြကွက်အတိုင်း ခပ်ဖြေးဖြေးလေး စုပ်မှုတ်ပြီး သူ့ပါးစပ်ထဲအထုတ်အသွင်းလုပ်နေတာများ တကယ်ပါဗျာ အမြန်လိုချင်မိ ပေမယ့် ခြေဖျား လေးတွေ ကွေးကောက်မိတဲ့အထိ ကြေနပ်မိရော။ လိင်တံထိပ်အရေပြားဖြတ်မထားတဲ့ ကျနော့်ငပဲဟာ အရေပြားလေး ကိုနောက်ပြန်စွဲ ထိပ်ခေါင်းလေးတစ်ဝိုက်များကလိလိုက်ရင် ဘယ်လိုမှတင်းမထားနိုင်ပါဘူး။ အချိန်အနည်းငယ်အကြာမှာတော့ နန္ဒလေ ကျနော်ပွိုင့်ကို သိသွားပြီး ဒါကိုပဲကလိနေတာကြောင့် ပြီးတော့မယ် အဆုံးသတ်တော့မယ့်အကြောင်း သူ့ကိုပြောလိုက်ရပါတယ်။ ဒီအခါမှာတော့ သူ ကျနော်လိင်တံထိပ်အရေပြားကိုနောက်ထိရောက်အောင်ဆွဲကိုင်ကာ ထိပ်ပိုင်းလေးကိုပဲ လက်နဲ့ဆုပ်ကိုင်ထားကာ ခပ်သွက်သွက် ကစားပါတော့တယ်။ ရေပြွတ်သေနတ်က တဆင့်ရေတွေပန်းထွက်လာသလို အားရပါးရထွက်လာတဲ့ ကျနော့်သုက်ရည်ဖြူ တွေဟာ မျက်နှာအနှံ့ကော နဖူးကော ရွှဲစိုသွားစေတာ တော်တော်များတယ်။ အပြန်အလှန်အနေနဲ့ သူကလည်း ကျနော့်ငပဲခေါင်း တစ်ဝိုက်က သုက်ရည်တွေသာမက နေရာအနှံ့က သုက်ရည်ပျစ်တွေကို လျာနဲ့ကလိကလိ လျက်ပါရော။ နောက်ဆုံးတော့ မျက်နှာ နှစ်ခုပူးကပ်ရင်း အနမ်းစစ်ပွဲဆင်နွှဲကြပါတယ်။ ကျနော်တို့နှစ်ယောက် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ဖက်တွယ်လှဲလျောင်းရင်း ခဏငြိမ်နေကြချိန်မှာ သူက ကျနော့်ကို သူ့ခြေထောက်နဲ့ခွလျက်သားဖြစ်သလို ကျနော့်ဗိုက်သားပြင်အနှံ့ကိုလည်း သူ့လက်ကလေး တွေနဲ့အသာအယာပွတ်သပ်နေ ပါတယ်။ အချိန်မသိတော့လောက်အောင် နှစ်ယောက်သားလဲလျောင်းနေကြတာ ညနေခင်း နေရောင်ခြည်တွေ သန်းလာချိန်အထိပါ။ အမှတ်မထင်ဖြစ်ပျက်ကျတဲ့ အခါသာမယရဲ့အလွန် ကျနော်ရွေ့လျားမှုမပြုလုပ်လိုသေးပေမဲ့ နန္ဒက ကျနော်တို့ရေးချိုးသန့်စင်ဖို့ကောင်းပြီ လို့အကြံပေးလာပါတယ်။
အိပ်ရာပေါ်က နှစ်ဦးသားထကာ ရေချိုးခန်းရှိရာကို သူဦးဆောင်တဲ့အတိုင်းလိုက်သွားမိပါတယ် ကျနော်လေ။ ရေပူစက်ကိုဖွင့် ရေပန်းကို မဖွင့်ခင် ရေပူလာချိန်အဖြစ် ခဏစောင့်ရင်း နှစ်ယောက်သားရပ်နေကြချိန် ပျော့နေသော သူ့ငပဲကို ကျနော်အသာအယာပွတ်သပ်ကစား လိုက်တယ်။ သူလည်း ထို့အတူလုပ်ပြန်တော့ ကျနော့်ငပဲက မာတောင့်လာပေမဲ့ သူ့ပစ္စည်းက သိပ်မမာလာပါဘူး။ ရေအတူချိုး ဆပ်ပြာ အတူပွတ်သပ်တိုက်ကြချိန်မှာ ကျနော့်စိတ်တွေထန် ပစ္စည်းက မာလာတာလေ သူကတော့ စိတ်မပါသလိုပဲ။ ဒါကြောင့် ကျနော် ဒူးထောက် ထိုင်ချလိုက်ကာ ပါးစပ်နဲ့ကလိပေးပေမယ့် မရတာကြောင့် လက်လျော့လိုက်ပါတယ်။ နန္ဒတယောက် ကျနော့်ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ ဆပ်ပြာကိုပွတ်သပ်တိုက်ချွတ်ပေးရတာကို သဘောကျဟန်တူတယ် အကြာကြီးပဲပွတ်နေတာကြောင့် ကျနော်လည်း သူ့တင်ကွဲကြောင်း တလျောက် ဆပ်ပြာမြုပ်များဖြင့် ပွတ်သပ်သလို လက်ချောင်းလေးများဖြင့် ခရေ၀ထဲကို ထိုးမွှေကလိမိပြန်ရော။
ကျနော်တို့ ရေမိုးချိုးပြီး အ၀တ်စားလဲပြီးပြန်တော့ ကိုးရို့ကားယားနိုင်စွာ စကားပြောနေဖြစ်ကြပြီးနောက် သူက ပြန်ဖို့သင့်ပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောလာတယ်။ ဟုတ်တယ် အနည်းငယ် ကသိကအောက်ဖြစ်စွာ ထွက်ခွာရမယ့်အဖြစ်က ကျနော်ခဏနေနိုင်ပြီး နောက်တစ်ကြိမ် ဇာတ်လမ်းစနိုင်ဖို့အတွေးဝင်နေတဲ့ စိတ်ကို ဒုက္ခရောက်စေသလိုပဲ။ သူ ကျနော့်နှုတ်ခမ်းတွေကို တပ်မက်စွာ နောက်တစ်ကြိမ်နမ်းသလို ကျနော်ကလည်း သူ့ပေါင်ခွဆုံကို နောက်ဆုံးတစ်ကြိမ်ဆုပ်ကိုင်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့မှ လှေကားထစ်တွေပေါ် အပျိုမတစ်ယောက် ဆင်းလာသလို စိတ်အေးကြည်သာ လျှောက်လာရင်း ကျနော့်ကားရှိရာဆီ လှမ်းသွားခဲ့တာပေါ့နော်။
‘တနော့နော့သွေးလာတဲ့ လေပြေထဲမှာ မြတ်လေးပန်းရနံ့တွေ ခိုဟီးလာသလိုပါပဲလား…..မွှေးလိုက်တာ’
Alex Aung (16 Feb 2016)
Posted by Alex Aung at 2:10 PM No comments:
''မိုးတိမ်ဖြူတို့သည်လည်း ... ''
ဟိုး​အောက်​​ခြေနားဆီကမှုန်​ပြပြမြင်​​နေရ​သောလယ်​ကွင်းစိမ်း​လေး​တွေ၊​တောင်​ကုန်း​လေး​တွေကိုမြင်​​နေခိုက်​မှာ ခင်​​လေး ရင်​​တွေတိုးတိတ်​စွာခုန်​​ပေါက်​လာ​လေသည်​ ။မကြာခင်​မှာသူမစီး​လာ​သော​လေယာဉ် ကြီးသည်​ ရန်​ကုန်​ အပြည်​ပြည်​ဆိုင်​ရာ​လေဆိပ်​ကို ​ရောက်​​ပေ​တော့မည်​ ။သူမကိုယ်​​ပေါ်မှာအသာခြုံထား​သောပုဝါပါးက​လေးကိုပြန့်​ပြူး​စေရန်​ လက်​ဖြင့်​ ​သေချာပြင်​ရင်းစိတ်​လှုပ်​ရှားမှုကိုထိန်းချုပ်​လိုက်​သည်​ ။
ရှစ်​နှစ်​လုံးလုံး ​ဝေးကွာခဲ့​သော မြေကို သူမ ​ခြေချခွင့်​ရခဲ့ပြီ။​MRCP တက်​ရင်းမြန်​မာပြည်​သို့မပြန်​ဘဲဒီဘက်​က​ဆေးရုံမှာ Join ပြီးအလုပ် ​ဝင်​ခဲ့​ပေမယ့်​တကယ်​တမ်းကျ​တော့သူမသည်​ မြန်​မာပြည်​နှင့်​မြန်​မာအစားအစာ​တွေကိုသာပိုမက်​​မောတတ်​မှန်းသိခဲ့ရပြီ။ဒီကလူ​တွေသင်္ကြန်​လည်​ပတ်​ချိန်​၊သီတင်းကျွတ်​ ပွဲ​ဈေးတိုးချိန်​တို့မှာသူမမျက်​ရည်​ကျတတ်​ခဲ့ပြီ။အခုချိန်​မှာ​တော့ သူမသည်​ ဟိုးအရင်​ကရှက်​ရွံ့စွာ​ပြေးထွက်​ခဲ့​သော၊ ​စိတ်​နာတတ်​​သေ ၊​ဒေါသကြီး​သော၊ခွင့်​မလွှတ်​တတ်​​သော မြတ်​​လေးခင်​ မဟုတ်​​တော့။ အရာရာကိုသည်းခံခွင့်​လွှတ်​တတ်​​သောရင့်​ကျက်​​သောသူမဖြစ်​လာခဲ့ပြီ။အချိန်​တို့သည်​ အရာရာကိုကုစားခဲ့ သည်​ မဟုတ်​ပါလား။
အခုချိန်​လမ်းမှာ​တွေ့ခဲ့ရင်​ အရင်​လိုဟန်​​ဆောင်​ပြီး​နေဦးမှာလား။ဟင့်​အင်း….ဟန်​​​ဆောင်​ခြင်းအတတ်​ပညာကို ခင်​​လေး သည်​ သူ့​လောက်​မကျွမ်းကျင်​ရိုးအမှန်​ပင်​။သူက​တော့တစ်​ဖက်​ကမ်းခတ်​တတ်​ကျွမ်းကျင်ခဲ့သည်​မဟုတ်​လား။
ခွဲခွာခဲ့စဉ်​​နောက်​ဆုံးအချိန်​က သူ့ပါးကိုခပ်​လွှဲလွှဲရိုက်​မိချိန်​မှာ သူ့မျက်​ဝန်းထက်​ကမျက်​ရည်​စ​တွေနှင့်​ နာကျင်​စွာ တောင်းပန်​ခဲ့သည်​ပဲ။ အရာအားလုံးကို​မေ့ပစ်​ခဲ့နိုင်​​ပေမယ့်​သူမရင်​ထဲကအချစ်​စိတ်​ကို​တော့ ​မေ့ဖို့ညာလို့မရ။ဘဝမှာတစ်​ခါသာချစ်​ခဲ့ဖူး သူမဟုတ်​ပါလား။ခင်​​လေးမျက်​ဝန်းအစုံကို​မှေးမှိတ်​လိုက်​စဉ်​ မျက်​လုံး​ထောင့်​စွန်းမှာမျက်​ရည်​တို့ခိုရစ်​​လေသည်​။
ထို့အတူသူမရင်​အစုံသည်​ လည်း .......။
သူမ​ရှေ့သို့လာချ​ပေးသည့်​ဓာတ်​ပုံကိုကြည့်​ရင်း ခင်​​လေး ​မေ​မေ့မျက်​နှာကိုနားမလည်​နိုင်​စွာကြည့်​မိသည်​ ။ ​မေ​မေက​တော့စကားနည်းသူမို့ခပ်​ပြုံးပြုံးပင်​
''သူ့နာမည်​က ​ကျော်​စွာတဲ့သမီး ...​မေ​မေ့ဆီမှာစိန်​ဝယ်​​နေကျမိတ်​​ဆွေတစ်​​ယောက်​ရဲ့သား​ပေါ့ ..သ​င်္ဘောသား​လေးပဲ။ သူတို့ကသမီး​တောင်းချင်​တဲ့သ​ဘောမျိုး​ပြောလာလို့​ မေ​မေကလည်းဘာရယ်​မဟုတ်​ တီး​ခေါက်​လိုက်​​တော့တကယ်​ပဲဓာတ်​ပုံယူလာပြတယ်​။ ​မေ​မေလည်း ​လေ့လာကြည့်​ပြီးပြီသမီးသ​ဘောကိုလည်းသိချင်​တယ်​။ ကောင်​​လေးကအခုဒီမှာပဲရှိ​သေးတယ်​ ။မပြန်​ခင်​တော့​တွေ့​ပေးမလားလို့ ။ သူတို့ဖက်​ကလည်းတစ်​ဦးတည်း​သောသားဆို​တော့မ​တော်​တရော်​​တွေနဲ့ ဖြစ်​သွားမှာစိတ်​ပူတယ်​နဲ့တူပါတယ်​။စဉ်းစား​ပေါ့သမီးရယ်​ ​မေ​မေက​တော့အတင်းမတိုက်​တွန်းပါဘူး။သမီးအသက်​လည်းမငယ်​​တော့ဘူး​လေ၊နှစ်​ဆယ့်​ရှစ်​ဆိုတာအရာရာကိုဆုံးဖြတ်​တတ်​တာပဲ။ .. ​မေ​မေက​တော့အမှန်​​ပြောရရင်​ သူ့ကိုသ​ဘောကျတယ်​။ အ​သောက်​အစားလည်းကင်းတယ်​ မိန်းမကိစ္စလည်းနာမည်​ပျက်​မရှိဘူး ''
​မေ​မေကတိုက်​တွန်းတာလည်းမဟုတ်​ ၊အမိန့်​​ပေးတာလည်းမမည်​ စကားကိုခပ်​​ဖော့​ဖော့​ပြောရင်းအခန်းပြင်​သို့ပြန်​ထွက်​သွားသည်​။ သူမဓာတ်​ပုံ​လေးကို ​သေချာယူပြီးကြည့်​မိသည်​ ။အရပ်​မြင့်​မြင့်​မျက်​ခုံးထူထူအသားဖြူဖြူလူတစ်​​ယောက်​ကသူမကိုပြုံးကာပြန်​ကြည့်​​နေ​လေသည်​။
အင်​…..မဆိုးဘူးပဲ။ သူမ ​ယောင်​နနဖြင့်​ပြန်​ပြုံးပြမိသည်​ ။အချိုးအဆစ်​ကျ​သောကိုယ်​​ပေါ်မှကွမ်းရိုးစင်းရှပ်​ ပြာ​ဖျော့​ဖျော့ကသူ့ကို ​သေသပ်​ကျန​သောလူတစ်​​ယောက်​အဖြစ်​ ပံ့ပိုးထား​သည့်​အပြင်​ မျက်​ခုံးထူထူ​အောက်​ကမျက်​လုံးရဲ့ညှို့ငင်​မှုကသူမကိုရင်​ခုန်​​စေပြန်​သည်​။​နောက်​တစ်​​နေ့မနက်​ခင်းမှာ​ မေ​မေ့ရဲ့အ​မေးကိုအသာ​ခေါင်းညိ်​တ်​ရင်း ​တွေ့ကြည့်​ဖို့လက်​ခံမိသည်​အထိသူကစိုးမိုးလွန်းလှသည်​ ။
ထို​နေ့ကသူမမီးဖိုထဲမှာလက်​စွမ်းပြမိသည်​။ ​မေ​မေ့ကို​တွေ့ကြည့်​ဖို့ ​ခေါင်းညိတ်​အပြီးမှာ သူမတို့အိမ်​သို့ထမင်းစားဖိတ်​တာမို့ သူမနားရက်​ကိုချိန်းဆိုကြခြင်းပင်​။ ခင်​​လေး ဒီ​နေ့ ​ဆေးခန်းကိုမသွား​တော့။လူနာ​တွေက်ိုလည်းဒီ​နေ့အတွက်​ ​သောက်​စရာ​ဆေးကိုကြို​ပေးခဲ့တာမို့ ည​နေခင်းသည်​ သူမအတွက်​ သက်​​တောင့်​သက်​သာရှိလှသည်​ ။
မေ​မေ့ကို​ခေါင်းငြိမ့်​ပြပြီး သူမမီးဖို​ချောင်​ထဲကထွက်​လာခဲ့လိုက်​သည်​။ ​မေ​မေနှင့်​ ​ကောင်​မ​လေးနှစ်​​ယောက်​ကမီးဖိုခန်းနဲ့ ထမင်းစားခန်းကိုကူးချည်​သန်းချည်​လုပ်​ကာ ​ပြင်​ဆင်​ရင်းကျန်​ခဲ့​လေသည်​။ ခင်​​လေး မြန်​မြန်​​ရေချိုးပြီးမျက်​နှာကို နို့ရည်​ပါးပါးလိမ်းကာ ခပ်​လတ်​လတ်​ပါတိတ်​တစ်​စုံကိုဝတ်​လိုက်​​သည်​ ။သူ့​ရှေ့မှာအရမ်းပြင်​ဆင်​ပြီးမ​နေချင်​ပါဘူး။ ​တော်​ကြာ သူ့ကိုအရမ်းလိုချင်​​နေတယ်​ ထင်​​နေဦးမယ်​။ခင်​​လေးအောက်​သို့ပြန်​ဆင်းလာခဲ့ချိန်​မှာပဲ အိမ်​​ရှေ့မှာကားတစ်​စီးရပ်​သံနှင့်​အတူ ​မေ​မေ့နှုတ်​ဆက်​သံဖိတ်​​ခေါ်သံတွေကိုကြားလိုက်​ရ​လေသည်​ ။သူမမီးဖိုခန်းထဲသို့အရင်​ဝင်​ပြီးလိုအပ်​တာ​တွေမှာ ကြားပြီးမှအိမ်​​ရှေ့သို့ထွက်​လာကာ ​မေ​မေ့​ဘေးနားမှာဝင်​ထိုင်​လိုက်​သည်​ ။
လူကြီး​တွေ​ပြောသမျှကိုခပ်​ပြုံးပြုံးနား​ထောင်​​ကာ ​ပြောဖို့လိုအပ်​ပါကကြည်​လင်​မွန်​ရည်​​သောအသံဖြင့်​ချိုသာစွာပြန်​​ပြော ​နေသောသူ့ကိုကြည့်​ရင်းသူမစိတ်​ထဲနှစ်​လိုစွာသ​ဘောကျကာ မဆိုးဘူးဟုတိတ်​တဆိတ်​မှတ်​ချက်​ချမိသည့်​အတွက်​ သူမကိုယ်​သူမ ရှက်​ရွံ့မိ​သည်​အထိပင်​ ။ထမင်းလက်​စုံစားအပြီးမှာထမင်းစားခန်းထဲသစ်​သီးခွာ​နေ​သောသူမအနားသူ​ရောက်​လာရင်း
''ကျွန်​​တော်​က ​ကျော်​စွာပါ၊ညီမ​လေးမြတ်​​လေးခင်​​နော်​ ''
ခင်​​လေးသူ့ကို ​မော့​ကြည့်​လိုက်​သည်​ ။ ညီမ​လေးတဲ့၊ သူ​ခေါ်လိုက်​​သောညီမ​လေးဆိုသည့်​အသံသည်​ သူမနားထဲစိမ့်​ဝင်​စီးဆင်းပြီးနှလုံး​သွေး​ကြောမှတစ်​ဆင့်​ နှလုံးသားသို့တိုင်​ ​ရောက်​ရှိခဲ့သည်​လားမသိ သူမရင်​အစုံသည်​ ​တဒိတ်​ဒိတ်​ခုန်​လှုပ်​လာ​လေသည်​။ငယ်​စဉ်​ကတည်းက ​ကျောင်းစာ​တွေနှင့်​နပမ်းလုံးပြီး အချစ်​ဆိုတာဘာမှန်းမသိ​သောမိန်းမပျိုတစ်​​ယောက်​မို့ သူမရှက်​သလိုရင်​ဖိုသလိုခံစားရကာ ​ခေါင်းငုံ့ရင်း စားပွဲ​ပေါ်​ကသူ့လက်​ဖျား​လေး​တွေကိုအမှတ်​မဲ့ကြည့်​​နေမိ​လေသည်​။ပန်း​သွေး​ရောင်​လွှမ်း​သောလက်​သည်းတို့က​သေချာစနစ်​တကျပုံ​ဖော်​ထားသလိုညီညာလွန်းလှသည်​။ သူမ​ခေါင်းငြိမ့်​မိလား မငြိမ့်​မိလား​သေချာမသိ။
ကျွန်​​​တော့်​ဘက်​က တော့ ဘာမှ​ပြောစရာမရှိပါဘူး...ကျွန်​​တော့အ​ပေါ်ညီမ​လေးရဲ့သ​ဘောထားက​ရောဘယ်​လိုရှိလည်းဟင်​ ''
'' ဟို...ချက်​ချင်းဆုံးဖြတ်​ဖို့​တော့ ​စောပါ​သေးတယ်​ ...ကျွန်​မ ''
''အို​ခေ....ကျွန်​​တော်​လည်းမ​လောချင်​ပါဘူး ..ညီမ​လေးဘက်​ကအဆင်​သင့်​ဖြစ်​တဲ့​နေ့ကို ​စောင့်​ပါ့မယ်​ ..ဒီကြားထဲတစ်​​ယောက်​အ​ကြောင်းတစ်​​ယောက်​သိ​အောင်​ ရင်းနှီးမှုရ​အောင်​ အဆက်​အသွယ်​မပျက်​ဘဲဖုန်းဆက်​တာတို့ဘာတို့လုပ်​ကြမယ်​​လေ ...ဒါနဲ့ ​ဖေ့ဘွတ်​ခ်​သုံးရင်​ ကျွန်​​တော်​ ဟို​ရောက်​လည်းအဆက်​အသွယ်​ လုပ်​လို့ရတာ​ပေါ့ ​နော့ ''
ခင်​​လေး​ ခေါင်းကိုအသာအယာငြိမ့်​မိသည်​။ထိုနေ့ကပြန်​သွားပြီးခင်​​လေးတို့ဖုန်း​ပြောဖြစ်​ကြသည်​ ။သူမသွားခင်​မုန့်​ကျွေးပါရ​စေဆို​တော့လည်းခင်​​လေးမငြင်းမိ။
သူသ​ဘောင်္ပြန်​တက်​ခါနီးလာနှုတ်​ဆက်​​တော့ခင်​​လေးဝမ်းနည်းစွာငြိမ်​သက်​​နေမိသည်​။မိန်းက​လေးမို့အိ​နြေ္ဒဆည်​ထား​သော်​လည်းခင်​​လေးမခွဲချင်​မိ။တ​ဖြေး​ဖြေး​ဝေးသွား​သောသူ့ကိုယ့်​ရနံ့သင်းသင်း​လေးကိုတရှိုက်​မက်​မက်​ခံစားရင်းခင်​​လေးတစ်​​ယောက်​ အချစ်​မှာဒူး​ထောက်​အရှုံး​ပေးလိုက်​ရ​လေတော့သည်​ ။
ဖုန်း screen ​မှာ​ပေါ်​နေ​သောစာလုံး​လေးနှစ်​လုံးကိုကြည့်​ရင်းသူမလက်​ဖျားတို့ ​အေးစက်လာသည်​ ။ပို့သင့်​သလားမပို့သင့်​လားသူမမသိ​တော့။မ​နေ့ကသူနဲ့စကား​ပြောရင်းသူကချစ်​လားလို့​မေးစဉ်​ ခင်​​လေးမ​ဖြေမိ။သူ့ဘက်​ကအတန်​ကြာနှုတ်​ဆိတ်​​နေပြီးမှလိုင်း​အောက်​သွားခဲ့တာမို့ ခင်​​လေးသူ့ကိုအားနာမိသည်​။သ​င်္ဘော​ပေါ်ပြန်​​ရောက်​သွားတာကြောင့် ကမ်းကပ်​သည့်​အချိန်​သာဖုန်း​ပြောရသလိုအင်​တာနက်​လိုင်း​ကောင်းရင်​ တစ်ညလုံးစကား​ပြောဖြစ်​ကြသည်​။ဒါ​ပေမယ့်​ခင်​​လေးကသာစတင်​ပြီး​ပြောရသူပင်​။လိုင်းကလည်း​ကောင်းတခါမ​ကောင်းတလှည့်​မို့တခါတခါ​ပြောရင်းလိုင်းက​အောက်​သွားတတ်​သလို တခါ တခါ မီးစိမ်း​နေသော်​လည်းစာမပြန်​နိုင်​ခဲ့။ထိုအခါ ခင်​​လေးသူ့ကိုနားလည်​​ပေးရသည်​သာ။ကျန်​သည့်​အချိန်​​တွေမှာ​တော့ သူမသည်​ တကိုယ်​​တော်​လွမ်းဆွတ်​သူအဖြစ်​ တိုးတိတ်​ တမ်းတရင်း ​နေ့ရက်​တို့ကို​ကျော်​ဖြတ်​​နေရသည် ​။
စကား​ပြောကြတာကြာ​လေသူ့ကိုချစ်​​သောစိတ်ကပိုပိုတိုးလာ​လေပင်​။သူ့အသံသူ့ဟန်​ သူ့ကိုယ်​က​ရေ​မွှေးနဲ့ကအစ သူ့လက်​ဖျံက​မွေးညင်း​နုလေး​တွေအဆုံးသူ့​ခြေဖ​နှောင့်​ရဲရဲ​လေးပါမကျန်​ သူမချစ်​သည်​ ။ချစ်​တာကိုချစ်​တယ်​လို့ဘာ​ကြောင့်​သူမ မ​ပြောရမည်​နည်း။​ သူမလက်​ညိုး​လေးက Sendဆို​သောစာလုံးဖျားကိုခပ်​ဝါးဝါးထိလိုက်​သည်​ ။သူမပို့လိုက်​​သောမက်​​ဆေ့​စ် လေးကဟိုဖက်​သို့ ​ရောက်​​ကြောင်းအမှန်​ခြစ်​​လေး​ပေါ်လာချိန်​မှာ​တောင်​သူမရင်​​တွေခုန်​​နေခဲ့​လေသည်​ ။အချစ်​သည်​ မိန်း​မောတတ်​သလားမသိ။သူမလိုင်း​အောက်​ပြီးဖုန်းကို ဂျူတီကုတ်​ဘေးကအိတ်​ထဲ​သေချာပြန်​ထည့်​ပြီး ​ဆေးရုံက​ပေး​သော နားနေခန်းက​နေပြန်​ထွက်​လာခဲ့လိုက်​သည်​။လူနာ​တွေအတွက်​စဉ်းစားလိုက်​ချိန်​မှာ​တော့သူမသည်​ ​စေတနာပြည့်​ဝ​သောဆရာဝန်​မ​လေးအဖြစ်​သို့ပြန်​လည်​ ​ရောက်​ရှိသွား​လေသည်​ ။​ အ​ဆောင်​တစ်​ခုလုံးကကုတင်​များမလုံ​လောက်​သဖြင့်​ လူသွားလမ်းကြားထဲမှာပါခုံတန်း​လေး​တွေဆက်​ရင်း ​နေရ​သော ​ဝေဒနာစုံလူနာများအကြားမှာသူမရင်​ခုန်​ဖို့ပင်​ မအားလပ်​​တော့။
''ဒီတစ်​​ခေါက်​ပြန်​လာရင်​ လက်​ထပ်​​ပေးချင်​တယ်​တဲ့သမီး ..''
''မ​စောလွန်းဘူးလား ​မေ​မေ၊ ပြီး​တော့ဒီကိစ္စမှာ ကို​ကျော်​စွာကအရင်​ သမီးကို​ပြောသင့်​တာလေ ''
''​အော်​ သမီးရယ်​ ​မောင်​​ကျော်​စွာနဲ့သမီးလည်းဖုန်း​တွေ​ပြော​နေကြတာ၊သူ့အသိုင်းအဝိုင်းဆိုတာလည်း ​​မေ​မေတို့အသိမိတ်​​ဆွေ​တွေကြားမှာ ​မေးမြန်းကြည့်​ပြီးသား၊လူကိုယ်​တိုင်​လည်းဘာ​လေးချက်​လို့ညာ​လေးချက်​လို့ဆိုပြီးအပြန်​အလှန်​ပို့ကြ အကဲခတ်​​နေကြတာ။ သမီးကဘာကိုအချိန်​ဆွဲ​နေတာလည်းသမီးတို့ချင်းလည်းချစ်​​နေကြတာပဲကို ''
''သမီးစိတ်​ထဲတစ်​မျိုးပဲ၊ကို​ကျော်​စွာကိုကြည့်​ရတာ မိဘသ​ဘောကျလို့ပြီးပြီး​ရော ​ခေါင်းငြိမ့်​ပြီးသမီးကိုကြည်​ဖြူ​နေရသလိုဘဲ ''
''​အော်​ ၊သူ့အသက်​အရွယ်​နဲ့ဆယ်​​ကျော်​သက်​​လေး​တွေလို​တော့ပြာယာခပ်​ ဖျတ်ဖျတ်လူး​နေပါ့မလား ခင်​​လေးရယ်​..ညည်း နှယ်​ ''
''​အေးတိ​အေးစက်​ကြီး ​မေ​မေ၊သမီးက​တော့သူ့ဘက်​ကမ​ပြောမချင်းလုံးဝဘဲ၊သူကိုယ်​တိုင်​လိုလိုလားလား​ပြောမှ ​ခေါင်းငြိမ့်​မယ်​ ၊ညည်းမချစ်​လို့လား​တော့ ​မေ​မေမ​မေးနဲ့ချစ်​တာကသတ်​သတ်​ သိက္ခာကသတ်​သတ်​ဘဲ ''
''​အေး၊ညည်းအပျိုကြီးဘဲလုပ်​ ၊ပဇီပဇာနဲ့ဇီဇာကို​ကြောင်​တယ်​ ''
စိတ်​ဆိုးမာန်​ဆိုးထထွက်​သွား​သော​မေ​မေ့ကိုကြည့်​ကာ သူမသက်​ပြင်းချမိသည်​ ။ခင်​​လေးက​တော့ ချစ်​လို့အမြတ်​တနိုး လက်​ထပ်​ယူတာဘဲလိုချင်သည်​ ။ကိုယ့်​ချစ်​သူမှ တယုတယအ​သေးစိတ်​​လေးကအစဂရုစိုက်​တာခံချင်​သည်​။ဒါက ခင်​​လေး မှမဟုတ်​ မိန်းက​လေးတိုင်းလိုလိုပင်​။ အခု​တော့ ...၊ ​နေ​ကောင်းလားစားပြီးပြီလားပြီးရင်​ ​ပြောစရာစကားမရှိ​တော့။ Typing ရိုက်​​နေတာကို ဒီဘက်​ကမြင်​​နေရ​သော်​လည်းထိုစာတို့သည်​ ခင်​​လေးဘက်​သို့ ​ရောက်​မလာ။တကယ်​ဆိုဒီ​နေ့ဘာစားလဲ ဘယ်​သွားလဲ ကိုယ်​ကဘယ်​မှာဘာလုပ်​​နေရတယ်​ဆိုတာမျိုး ​ပြော​စေချင်​သည်​ ။သူ့အလုပ်​ကိုယ့်​အလုပ်​ အဆင်​မ​ပြေတာ အဖုအထစ်​ရှိတာ​လေး​တွေ​ဝေမျှရင်းတစ်​​ယောက်​ကိုတစ်​​ယောက်​ အား​ပေးချင်​သည်​ ။ ဒါအဘယ်​မျှကြည်​နူးစရာ ​ကောင်း လိုက်မည်​နည်း။သို့​သော်​လဲ ခင်​​လေးသည်​ ဒါကိုမည်​သို့​သောအခါမှဖွင့်​​ပြောလိမ့်​မည်​မဟုတ်​ ။
သူမ စိတ်​တိုစွာ ​ခေါင်းကဆံပင်​​တွေကိုဆွဲဖွပစ်​လိုက်​သည်​။စိတ်​ရှုပ်​လိုက်​တာ။သူမ​မျော်​လင့်​ထား​သောချစ်​ခြင်းတရား ဆိုသည်​မှာထိုသို့​ စိတ်​ပျက်​ဖွယ်​ရာအ​ခြေအ​နေမဟုတ်​ ။ ​နောက်​ဆုံးကျ​တော့လည်းသူ့ကိုချစ်​သည့်​စိတ်​ဖြင့်​အရာရာကိုခွင့်​ လွှတ်​​ပေးရဦးမည်​သာ။သူမတို့လက်​ထပ်​ကြဖို့ ခင်​​လေးဖက်​က ​ခေါင်းညိတ်​ခဲ့ရပြန်​သည်​။
သူမ​ရှေ့မှာမြင်​​နေရ​သောဖိတ်​စာနမူနာ​လေး​တွေကိုကြည့်​ရင်းခင်​​လေးအသည်းယား​နေမိသည်​ ။ ​ဖျော့​တော့​​​ပေမယ့်​ဆန်း ပြား​သောအ​ရောင်​နှင့်​ဟန်းမိတ်​လက်​ရာ​လေး​ကြောင့်​ဖိတ်​စာ​လေးကမထိရက်​စရာလှပလွန်းသည်​ ။ ခင်​​လေးဖိတ်​စာတစ်​ခုကိုလက်​ဖြင့်​ဖွဖွပွတ်​သပ်​ရင်းဟိုဖက်​က viber ဖြင့်​​ခေါ်ထား​သောဖုန်းကိုနားမှာကပ်​ရင်းမြူးတူးစွာဖြင့်​
''မဟုတ်​ဘူးညီမ​လေး၊ဒီကညီအကိုလိုခင်​တဲ့​ကောင်​​လေးတစ်​​ယောက်​ကို အကူအညီ​တောင်းပြီးနမူနာလုပ်​ခိုင်းထားတာ၊ ညီမ​လေးကြိုက်​တာ ရွေး​လေ၊ ပြီးမှလိုသ​လောက်​အ​ရေအတွက်​ကိုထပ်​လုပ်​ခိုင်းရမှာ''
''အကိုကဓာတ်​ပုံဘဲမြင်​ရတာ​လေ၊ပြီး​တော့အကိုကသိပ်​မသိဘူး၊ညီမ​လေးကြိုက်​တာ​ရွေးပါ၊မင်္ဂလာဝတ်​စုံအ​ရောင်​လည်းခင်​​လေးစိတ်​ကြိုက်​လုပ်​​နော်​ ၊အားမနာနဲ့ အကိုကခင်​​လေးကြိုက်တာလိုက်​ဝတ်​မယ်​ ၊ ''
ခင်​​လေးအသံတိတ်​သွားသည်​ ။အကုန်​သူမသ​ဘောဆိုသည့်​စကားသည်​ ဒီထက်​ပို၍နူးနူးညံ့ညံ့ရှိလျှင်​ သူမအားဦးစား​ပေးသည်​ဟုဆိုကာဘယ်​​လောက်​​ပျော်​စရာ​ကောင်းလိုက်​မည်​နည်း။အခု​တော့သူ့အသံကဝတ္တရား​ကျေတာထက်​နည်းနည်း မှမပို။ဒါဆိုဘာလို့ကျွန်​မကိုချစ်​လားလို့​မေးခဲ့တာလည်းအကိုရယ်​။ခင်​​လေး ဖုန်းကိုချလိုက်​ရင်းဖိတ်​စာလာပို့​သော ​ကောင်​​လေးကိုသူမကြိုက်​​သောတစ်​ခုကို​ရွေး​ပေးလိုက်​ရင်းအ​ရေအတွက်​ကိုပါ ​ပြောပြလိုက်​သည်​ ။ ​ကောင်​​လေးပြန်​သွားမှ ​မေ​မေ ရှိရာ မီးဖို​ချောင်​သို့ဝင်​ပြီး မကျေမနပ်သောလေသံဖြင့်​
''မသိရင်​ တစ်​​ယောက်​တည်း​ဆောင်​မှာကျ​နေတာဘဲ၊အကုန်​လုံးကိုယ်​ဘဲတစ်​​ယောက်​တည်းလုပ်​​နေရတယ်​ အရမ်းစိတ်​တိုတာဘဲ''
''​မေ​မေတို့လုပ်​​ပေးတာနဲ့သူ တူမလား​မေ​မေရဲ့၊ဘယ်​သူမဆိုကိုယ်​ယူမယ့်​​ယောင်္ကျားနဲ့တိုင်​တိုင်​ပင်​ပင်​လုပ်​ချင်​တာ​ပေါ့။အခု​ဖြစ်​​နေတာက ကူတာမကူတာထက်​ စိတ်​မဝင်​စားတာကို​ဒေါသဖြစ်​​နေတာ ''
''မြတ်​​လေးခင်​ ၊သမီး၊သမီးတို့ကမိဘစီစဉ်​တာကိုလက်​ခံပြီးမှသမီးတို့ချင်းစကား​ပြောရတာဘာကြာ​သေးလို့လည်းကွယ်​ ၊ အချိန်​ယူရမှာ​ပေါ့သမီးရယ်​ ၊အသက်​ သုံးဆယ်​​ကျော်​​ယောင်္ကျားတစ်​​ယောက်​ကလူငယ်​​တွေလို​တော့ချစ်​စကားကြိုက်​စကား​တွေဘယ်​​ပြောပါ​တော့မလည်း၊​နေရာတကာကိုယ့်​စိတ်​ကိုယ့်​သ​ဘောလုပ်​တာပို​တောင်​​ကောင်း​သေးတာမဟုတ်​လား ''
သူ့​ရှေ့မှမ​ပြေးရုံတမယ်​ သွား​နေ​သောနာစ့်​​လေး​နောက်​ကခပ်​သွက်​သွက်​လိုက်​ရင်းသူမလှမ်း​မေးလိုက်​သည်​ ။
ဒီ​နေ့​ဆေးရုံမှာဂျူတီမရှိ။သို့​သော်​ အချိန်​အားမ​နေချင်​​သောခင်​​လေးက သူမတို့ရဲ့ဆရာကြီးထိုင်​​သောအထူးကု​ဆေးခန်း ကြီးမှာကူညီလုပ်​ကိုင်​​ပေးတာမို့ကြာ​တော့ ​ဆေးခန်းကနာ့စ်​​လေး​တွေဆရာဆရာမ​တွေနှင့်​လည်းရင်းနှီးနေသည်​ ။
'' .... ​ကေစ့်​မမ ''
''ဟယ်​ Suicide လုပ်​တာလား ''
''ရှုးးးး၊တိုးတိုးတိတ်​တိတ်​မမ၊ဆရာကြီးမိတ်​​ဆွေအစ်​မရဲ့သား​လေးလို့​ပြောတယ်​။ သူတို့က​တော့မ​တော်​တဆထိတယ်​လို့​ပြောတာ​ပေါ့။ဒါ​ပေမယ့်​တမင်​လတ်​​ကောက်​ဝတ်​ကိုဓားနဲ့လှီးတာ ​နေမယ်​ ''
သူမရင်​ဘတ်​ကိုလက်​ဖြင့်​ဖိရင်းအလန့်​တကြား ရေရွတ်​မိသည်​ ။တဆက်​တည်းနှုတ်​မှလည်းမိုက်​လိုက်​တာ​နော်​ ဟု ​ပြောမိပြန်​သည်​ ။အခန်းထဲမှာ​သွေး​တွေကမြင်​မ​ကောင်း။ဆရာကြီးကိုယ်​တိုင်​ Dressing လုပ်​​နေသဖြင့်​သူမ ​နောက်​နားမှာ အသာရပ်​ရင်းစပ်​စုမိသည်​ ။ကုတင်​ထက်​မှာအသားဖြူဖြူ ​ချော​ချောလူငယ်​​လေးတစ်​ဦးက ​ဖျော့​တော့စွာမှိန်း​နေ​လေသည်​ ။ '​ချောလိုက်​တာ 'ဟုသူမနှုတ်​ကအသံပင်​ ခပ်​တိုးတိုးထွက်​မိသည်​ အထိပင်​ ။ နီ​စွေး​သောနှုတ်​ခမ်းကိုပြတ်​ထွက်​လုမတတ်​ကိုက်ထားပြီး မည်းနက်​​သောမျက်​ခုံးတို့​အောက်​မှမျက်​​တောင်​​မွှေးစိပ်​စိပ်​​လေး​တွေကြားမှ မျက်​ရည်​ဥ​လေး​တွေကိုမြင်​မိရတော့ ဘာရယ်​မသိသူမစိတ်​ထဲသနား​နေမိသည်​ ။​တော်​​တော်​များနာ​နေသည်​လားမသိ။ ဘာ​ကြောင့်​များသတ်​​သေဖို့ကြိုးစားရသလဲကွယ်​ ။လူ့ဘဝဆိုတာရခဲပါဘိနဲ့။ပုံစံ​လေးကသပ်​ရပ်​ပြီး အဆင့်​အတန်းမြင့်​ပုံရသည့်​အတွက်​ ​ငွေ​ကြောင့်​​တော့ဟုတ်​ဟန်​မတူ​ ။သူမစိတ်​ထဲ ​အေး​ဆေးဖြစ်​သွားလျှင်​ ​မေးဖို့ ​တေးထားလိုက်​မိသည်​ ။
''​သွေးထွက်​လွန်​ရင်​​​တော့အန္တရာယ်​ရှိ​ပေမယ့်​ အခု​တော့စိတ်​ပူဖို့မလို​တော့ပါဘူးး။ ကျန်​တာကိုကျွန်​​တော့်က​လေး​တွေက ကြည့်​​ပေးပါလိမ့်​မယ်​ ..အစ်​မလည်းစိတ်​ချ​တော့၊ဟုတ်​ပြီလား''
''သူထပ်​ပြီးလုပ်​မှာစိတ်​ပူလို့ပါ၊ပြီး​တော့မှုခင်း​တွေဘာ​တွေဖြစ်​မှာစိုးလို့ အပြင်​​ဆေးခန်းကိုသွားပြတာလက်​မခံကြဘူး။ငါ့​မောင်​ရှိလို့​တော်​​သေးတယ်​ ​ကျေးဇူးပါကွယ်​ ''ကောင်​​လေးရဲ့အ​မေကခပ်​တိုးတိုး​ပြောသည်​။
''သမီးတို့လိုအပ်​တဲ့ Treatment လေး​တွေဆက်​လုပ်​ထား​ပေး၊ဆရာတို့စကား​ပြောစရာရှိလို့၊စိတ်​ချမယ်​​နော်​ ၊
ကဲ အစ်​မလာ…စကား​ပြောရ​အောင်​ ''
ဆရာကြီးကသူ့အခန်းရှိရာဖက်​သို့ထွက်​သွားသဖြင့်​ ခင်​​လေးလူနာ​ကောင်​​လေးနားမှာ အသာရပ်​​နေမိသည်​ ။ ​ကောင်​​လေး ကသတိရှိရက်​နှင့်​ မျက်​လုံးကိုမှိတ်​ထားတာမို့ သူမလည်းဘာမှလုပ်​စရာမလို​ပေမယ့်​ဘာ​ကြောင့်​မှန်းမသိ ​ထို​နေရာမှာ ရပ်ပြီး နာစ့်​မ​လေး လုပ်ပေးနေသမျှကိုကြည့်​​နေမိသည်​ ။
ရုတ်​တရတ်​​ကောင်​​လေးနှုတ်​က အသံတိုးတိုး​လေးထွက်​လာသလို မျက်​ဝန်း​ထောင့်​မှမျက်​ရည်​​စီး​ကြောင်းကနားထင်​မှတစ်​ဆင့်​​ခေါင်းအုံးဖြူ​လေး​ပေါ်​ကျသွား​လေသည်​။သူမစိတ်​မ​ကောင်းစွာအခန်းအပြင်​သို့ထွက်​လာခဲ့ပြီး ​ခုံတန်းလျားတစ်​ခု​ပေါ် ထိုင်​ချပြီးငြိမ်​သက်​စွာ ​တွေး​နေမိသည်​။
''အင်​...ဟင်​ ​ဆောရီးသန္တာ မကြားလိုက်​လို့ ''
သူမရှက်​ရွံ့စွာ ဖြေရင်းပြုံးလိုက်​မိသည်​။သန္တာကသူမလက်​ကိုဆွဲရင်း အထူးကု​ဆေးခန်းရဲ့အထပ်​တစ်​ထပ်​တိုင်းမှာရှိ​သော ​ကောင်​တာပုံး​နောက်​သို့ဝင်​ကာ
''လာ ..တိုးတိုး​လေး​ပြောပြမယ်​ ''
''​ရတယ်​ ၊သန့်​ရှင်း​ရေးလုပ်​​နေတယ်​ ​ဒေါ်ကြည်​ဝင်းနဲ့မလှမြင့်​ရှိတယ်​ ၊ ​ပြောမလို့ပါဆို၊ကောင်​​လေးက​လေအ​ခြောက်​​လေး​တော့၊မထင်​ရဘူး​နော်​ ''
''သန္တာ၊သူများသားသမီးကိုအ​ခြောက်​အ​ခြောက်​နဲ့၊ကြားသွားရင်​ အားနာစရာ ''
''အင်းပါ၊​ပြောချင်​​ဇောများသွားလို့၊သူ့အ​မေက​လေအခုမှသ်ိတာတဲ့၊တစ်​ဦးတည်း​သောသားမို့ဆုံးရှုံးမှာလည်း​ကြောက်​ ၊ အဲ့လိုဖြစ်​တာကိုလည်းရှက်​​နေတာ၊ဟိုဖက်​က ​ကောင်​​လေးကလည်းချစ်​တယ်​တဲ့ မိဘ​တွေသိမှာစိုးလို့လမ်းခွဲတယ်​​ပြောတယ်​ ၊သူ့အ​ဖေကြီးက​တော့ ဟို​ကောင်​​လေးကိုသတ်​ပစ်​မယ်​ဆိုပြီးစုံစမ်း​နေ​တယ်​တဲ့ ''
''နင်​ကဘယ်​လိုလုပ်​သိတာလည်း ..စပ်​စုမရယ်​ ''
''မမကလည်း၊သူကျမသိချင်​တာကျလို့၊ခုနကဆရာကြီးအခန်းမှာ ​ဆေး​ပြောင်းဖိုသွား​မေးရင်း​ပြော​နေတာ၊သန္တာလည်းအချိန်​ဆွဲပြီးဟိုဟာယူသလိုဒီဟာယူသလိုနဲ့နား​ထောင်​လာတာ ''
''​အော်​ ၊မတူဘူး​လေသန္တာရယ်​ အခုဟာက ​ယောင်္ကျားချင်းဖြစ်​​နေတာကို၊လူ့အသိုင်းအဝိုင်းကဘယ်​လက်​ခံပါ့မလည်း၊တစ်​ချို့ကအမြင်​ကျဉ်းကြတယ်​​လေ ''
ခင်​​လေးတို့စကား​ပြော​နေစဉ်​ ဆရာကြီးနှင့်​​ကောင်​​လေးအ​မေ ထွက်​လာ​သော​ကြောင့်​ သူမတို့အရှိန်​သတ်​လိုက်​ရသည်​ ။
''သမီးမြတ်​​လေး၊ဒီအန်​တီက ဆရာ့ငယ်​သူငယ်​ချင်းဘဲ၊ ခုနကလူနာက​လေးရဲ့ ​မေ​မေပေါ့၊​ဒေါ်မြမြသက်​တဲ့၊သူကကျွန်​​တော့်​တပည့်​​လေး၊မြတ်​​လေးခင်​တဲ့၊ ဒီလိုသမီး​ရေ…သူကလူနာကိုအိမ်​ပြန်​​ခေါ်သွားချင်​တယ်​ဆို​လို့ ဆရာလည်း​ကောင်းမယ်​ထင်​တာနဲ့ခွင့်​ပြု​ပေးလိုက်​တယ်။ ဒါ​ပေမယ့်​လူနာကိုကြည့်​ဖို့ကျဆရာကအဆင်​မ​ပြေဘူး သူ့အိမ်​ကဆရာနဲ့​ဝေးတယ်​။ ဆို​တော့ ကာ သမီး​နေတဲ့ရန်​ကင်းကဆိုရင် တက္ကသိုလ်​ရိပ်​သာလမ်းကနီးလို့ သမီးသွားကြည့်​​ပေးနိုင်​မလား ''
''အန်​တီကသမီးကို ​ခြေကြွခအ​နေနဲ့သတ်​သတ်​ချီးမြှင့်​မှာပါသမီး၊သား​လေးကတစ်​ခုခုထပ်​လုပ်​မှာစိုးလို့ အန်​တီကအိမ်​ကို​ခေါ်ထားချင်​တာပါ၊ အိမ်​မှာဆို​တော့ အနီးကပ်​ကြည့်​နိုင်​တာ​ပေါ့​နော်​ ''
''​ပေးစရာမလိုပါဘူးရှင့်​၊ဆရာကြီးမိတ်​​ဆွေဆိုသမီးလာကြည့်​​ပေးပါ့မယ်​ ၊နက်​ဖြန်​ကစပြီး​ဆေးရုံမသွားခင်​လာလာကြည့်​​ပေးပါ့မယ်​ ''
''​ကျေးဇူးတင်​ပါတယ်​ သမီးရယ်​ ''
အန်​တီကြီးကမျက်​ရည်​တလည်​လည်​ဖြင့်​​ကျေးဇူးတင်​စကားဆိုရှာသည်​ ။ခင်​​လေးအခန်းထဲမှာ ​ဆေးရှိန်​ဖြင့်​အိပ်​​မောကျ​နေ​သော ​ကောင်​​လေးကိုကြည့်​ကာသနားစိတ်​ဖြင့်​လက်​ခံလိုက်​ခြင်းပင်​ ၊သူမသာဆိုလည်းချစ်​သူကထားခဲ့ရင်​ ထိုသို့လုပ်​မိမည်​လားမ​ပြောတတ်​ ။​သေချာတာက​​တော့ ​ကောင်​​လေးသည်​ အသက်​​ပေးချစ်​တတ်​သူ…။
ထိုညကဟို​တွေးဒီ​တွေးနှင့်​ ခင်​​လေးအိပ်​မ​ပျော်​။ မနက်​ကျလျှင်​ သတိုသမီးဝတ်​စုံအတွက်​ Fitting ​လုပ်​ရ​တော့မည်​ ။ မကြာခင်​ သူမသည်​လည်း အိမ်​​ထောင်​ရှင်​မဖြစ်​ရ​တော့မည်​ ။သို့​သော်​ အခုထိတိုင်​ သူမစိတ်​တို့က ​ဝေ​ဝေဝါးဝါးပင်​ ။ငယ်​စဉ်​ကဖတ်​ရ​သောဝထ္ထု​တွေထဲကလို သူချစ်​မဟုတ်​ဘဲကိုယ်​ချစ်​များဖြစ်​​နေသလားဟု ​တွေးမိ​သော်​လည်းကြာရင်​​တော့မချစ်​​သော်​လည်းသံ​ယောဇဉ်​ဖြစ်​လာမှာပါဟု ​ဖော့ပြီး ​ဖြေသိမ့်​ရပြန်​သည်​ ။ ​မေ​မေ​ပြောသလိုသူချစ်​ပြဖို့ရှက်​​နေတာလည်းဖြစ်​နိုင်​ပါသည်​ ။
ခြံပေါက်​ဝက ဟွန်းတစ်​ချက်​တီးရင်း ခင်​​လေးကြည်​လင်​စွာပြုံး​နေမိသည်​ ။မနက်​​စော​စောကကို​ကျော်​စွာ့အိမ်​ကဖုန်း လာသည်​ ။လူစားထိုးတာဝန်​လွှဲမည့်​သူရပြီဖြစ်​သည့်​အတွက်​ မကြာခင်​ ပြန်​လာ​တော့မည်​တဲ့။ သူမကို​တော့ကြိုမ​ပြောပါနဲ့ဦးလို့ပိတ်​ထားသည်​ဆို​သော်​လည်း ​ယောက္ခမ​လောင်းကချစ်​ကြည်​နူးစွာတိုးတိုးတိတ်​တိတ်​သတင်း​ပေးထားတာပင်။ အဟင်း…မဆိုးပါဘူး သူမကိုအံသြ၀မ်းသာ​ဖြစ်​​အောင်​ လုပ်​မည်​ဆို​တော့သူလည်းအလုပ်​တစ်​ဖက်​နဲ့ မအားတဲ့ကြားက ချစ်​ရှာတတ်သားဟု​တွေးကာလူကမျက်​နှာပိုးမသတ်​ချင်​​တော့။
အိမ်​ထဲ​ရောက်​​ပြန်တော့လည်း လူနာ​ကောင်​​လေးကအိမ်​​ပေါက်​ဝက​ စောင့်​ဆိုင်းရင်း သူ့ကိုပြုံးပြနေတာမို့ ခင်​​လေးအူ​ကြောင်​​ကြောင်​ပြန်​ပြုံးပြလိုက်​မိသည်​။ မ​နေ့က​သေ​ကောင်​​ပေါင်းလဲဖြစ်​တာသူမဟုတ်​သလိုပါလား။
''ဟုတ်​ မမ၊စိုးရိမ်​စရာ​တော့မဟုတ်​​တော့ပါဘူး၊လာ​လေမမ၊ကျွန်​​တေ့ာအခန်းမှာ ​ဆေးထည့်​ဖို့ပြင်​ထားတယ်​ ''
ကိုယ်​တိုင်​လည်းစိတ်​ကြည်​လင်​​နေ​သည့်​အပြင်​ လူနာကလည်းရွှင်​ပျ​နေသဖြင့်​ ခင်​​လေး ​ကျေနပ်​စွာသူ့​နောက်​ကလိုက်​လာရင်း
''အစ်​မနာမည်​ကမြတ်​​လေးခင်​ပါ၊​ မောင်​​လေးနာမည်​က​ရော ''
'' ပြည့်​စုံ​အောင်​ပါမမ ''
သူမက ​ကောင်​​လေးလက်​မှဒဏ်​ရာကိုပတ်​တီးဖြည်​ရန်​ လိုအပ်​သည်​များကိုထုတ်​ရင်း
''ကိုယ့်​​မောင်​​လေးအရွယ်​မို့ ​မေးချင်​မိတယ်​ ၊မ​နေ့ကချစ်​သူနဲ့ပြသနာတက်​လို့ဒီ​လောက်​ထိလုပ်​တာလား ''
''ဟုတ်​တယ်​ ၊သူကလမ်းခွဲဖို့​ပြောတယ်​​လေသူ့အိမ်​ကသ​ဘောတူတဲ့လူနဲ့ယူ​တော့မယ်​တဲ့ ''
''အို၊ ​ကောင်​မ​လေးကလည်း ''
သူမမျက်​နှာသည်​ ​ကောင်​​လေးဧ။်​ ပွင့်​လင်း​သောအ​ဖြေ​ကြောင့်​အားနာလွန်းစွာပူထူသွားသည်​ အထိပင်​။သူ ထိုကဲ့သို့​ဖြေလိမ့်​မည်​ဟု ဘယ်​လိုမှထင်​မှတ်​မထား။
''ဟားဟား၊ဟုတ်​တယ်​ ကိုယ့်​ချစ်​သူနဲ့တူတူ​နေရတာမ​ပျော်​တဲ့လူဘယ်​သူရှိမလဲ မမရဲ့၊ မမလည်းမင်္ဂလာ​ဆောင်​​တော့မှာဆို ''
''အင်း၊ ​ရှေ့လမှပါ၊မမခင်​ပွန်း​လောင်း​တောင်​ ပြန်​မ​ရောက်​​သေးဘူး ''
သူမဖွဖွပြုံးရင်း​ဖြေမိသလိုစိတ်​ထဲကလည်းနက်​ဖြန်​ဆို ကိုယ့်​​ရှေ့ဘယ်​လိုထူးခြား​သောအံ့သြဖွယ်​ရာ​တွေနှင့်​သူ​ရောက်​လာမည်​နည်း။သူမရင်​ခုန်​လှပါသည်​ ။ ဒါမှမဟုတ်​ သူရင်​ခုန်​​အောင်​ ???
သူမပြုံး​နေတာကို ​ကောင်​​လေးကကြည့်​ပြီးရီ​တော့သူမရှက်​သွားသည်​။ပြီးမှနှစ်​​ယောက်​သားတိုင်​ပင်​ထားသလိုရယ်​မိကြ​လေသည်​ ၊၊
ကားကို​လေဆိပ်​ထဲအတင်းချိုး​ကွေ့ခဲ့ပြီးကားပါကင်​မှာဖြစ်​သလိုထိုးရပ်​ကာ ခင်​​လေးကား​နောက်​ခန်းထဲက ပန်းစည်းကို ဆွဲယူလိုက်​သည်​ ။​ဖွေးလွှ​သောနှင်းဆီပွင့်​ဖြူတို့ဆီမှသင်းပျံ့​သောရနံ့ကမနက်​ခင်းကိုကြက်​သ​ရေရှိစွာလန်းဆန်း​စေသည်​။
ဒါ​ပေမယ့်​ခင်​​လေးကဗျာမဆန်​အား။သူမကို surprise လုပ်​မည့်​အကို့ကို သူမကတဖန်​surprise​လုပ်​မည်​ဟုအားခဲထား​သော်​လည်းညကအ​တွေးများစွာနှင့်​ရင်​ခုန်​ကာအိပ်​မရ​​သော ​ကြောင့် ​လေယာဉ်​ ဆိုက်​ချိန်​မှရောက်​လာခဲ့တာမို့ပင်။ ခင်​​လေး ဝင်​​ပေါက်​သို့​ရောက်​သည့်​အချိန်​မှာပဲ အထဲကမှန်​ခန်းထဲမှာ ​ရောက်​​နေ​သောအကို့ကို ​တွေ့လိုက်​ရသည်​မို့ ​တော်​ပါ​သေးရဲ့လို သက်​ပြင်းချမိသည်​။တကယ်​ဆိုအကိုပြန်​လာမှာဘယ်​သူမှမသိ။ခင်​​လေးသူငယ်​ချင်းရဲ့အကိုကတိုက်​ဆိုင်​စွာအကိုတို့​သင်္ဘောမှာလူစားဝင်​ရမည့်​လူဖြစ်​တာမို့ ​မေးရင်းမြန်းရင်းသိရတာပင်​ ။အကိုကသူမကိုမမြင်​ ။ခင်​​လေးထိုင်​ခုံတန်းတစ်​ခုမှာငြိမ်​ငြိမ်​​လေးထိုင်​ကာအကို့လှုပ်​ရှားပုံကိုတိတ်​တဆိတ်​ကြည့်​ရင်းသူမရင်​ထဲချစ်​မြတ်​နိုးမှုကငြိမ့်​​ငြောင်းစွာစီးဆင်းလာ​လေသည်​ ။မကြာခင်​ အကိုအပြင်​သို့ထွက်​လာ​တော့မည်​။ခင်​​လေးမတ်​တပ်​ရပ်​ရင်း အကိုထွက်​လာမည့်​အ​ပေါက်​ကို ​ဖြေး​ဖြေးချင်းလမ်း​လျှောက်​လာခဲ့လိုက်​သည်​ ။အ​ပေါက်​ဝကထွက်​လာ​သောအကို့ကိုသူမကြည်​စင်​စွာပြုံးပြလိုက်​သည်​။ သူမကိုမြင်​သွား​သောအကို့မျက်​နှာကရုတ်​တရတ်​ပျက်​ယွင်းသွား​သော်​လည်းချက်​ချင်းပြင်​လိုက်​ကာ သူမရှိရာဆီသို့ ​ခြေလှမ်းကြဲကြဲ​လျှောက်​လာ​​လေသည်​။
အစ်​ကို့ကို​ ​ပြေးဖက်​လိုက်​​သောလူငယ်​​လေးကိုသူမ​နောက်​​ကျောဖက်​ကမို့မမြင်​ရ။အစ်​ကို့မျက်​နှာကနီရဲပျက်​ယွင်းစွာဖြင့်​ပြန်​မတုန့်​ပြန်​​သော​ကြောင့်​ထင့်​။အစ်​ကို့ကိုဖက်​ထား​သော ​လူငယ်​​လေးကသူမရှိရာဖက်​သို့ဖြတ်​ကနဲလှည့်​ကြည့်​လိုက်​​လေသည်​ ။သူ့မျက်​နှာကိုမြင်​လိုက်​စဉ်​မှာခင်​​လေးရုတ်​တရတ်​ဘာ​ပြောရမှန်းမသိဘဲအူ​ကြောင်​​ကြောင်​ဖြစ်ကာအစ်​ကို့မျက်​မှာက်ိုစိုက်​ကြည့်​​နေမိသည်။ ​ကောင်​​လေး၊​ကောင်​​လေးပါလားဒါဆိုသူနဲ့ကိုကိုက ...။
''ဟာ၊မမ ..ဘယ်​သူ့ကိုလာကြိုတာလည်း၊ဒါကျွန်​​တော်​​ပြောတဲ့ကိုကို​လေကျွန်​​တော့ချစ်​သူ​ပေါ့ ''
​ကောင်​​လေးက ​ပျော်​ရွှင်​စွာမိတ်​ဆက်​​ပေး​ပေမယ့်​ အစ်​ကို့မျက်​နှာကဆိုးရွားစွာပျက်​ယွင်း​နေသလို ခင်​​လေးမျက်​နှာတစ်​ခုလုံးဖြတ်​ရိုက်​ခံလိုက်ရသည့်အတိုင်း စပ်​ဖျည်းပူ​နွေးစွာဖြင့် မျက်​ရည်​ကြည်​တို့​ဝေ့ဝဲရင်း သူမလက်​ထဲကိုင်​ထား​သောပန်း စည်းမှာ ​​ကြွေပြားအခင်း​ပေါ်သို့လွတ်​လပ်စွာကျသွား​လေတော့သည်။
ခင်​​လေး ကားမှန်​နားကိုမျက်​နှာကပ်​ရင်းပြင်​ပကိုကြည့်​လိုက်​သည်​ ။မည်းနက်​​သောလမ်းရဲ့​ဘေးတစ်​ဖက်​တစ်​ချက်​ဆီကရိပ်​ကနဲရိပ်​ကနဲ ကျန်​ရစ်​ခဲ့​သော လမ်းမီးဝါကျင်​ကျင်​​လေး​တွေကိုကြည့်ရင်းသူမစိတ်​ထဲလွမ်း​မောသလိုခံစားရသည်​။ဘဝမှာရင်​ခုန်​မိ​သောလူ​ယောင်္ကျားသည်​ လိင်​တူချင်းချစ်​တတ်​​သောလူတစ်​​ယောက်​ဖြစ်​မယ်​မှန်း သူမမသိခဲ့ရ​လောက်​​အောင်​ ပတ်​ဝန်း ကျင်​ကို​မေ့​လျော့​နေခဲ့သည်​။ မြန်​မာပြည်​ကိုပြန်​​လာမှာသိ​သွား​သော ​ကောင်​​လေးကသူမကိုလာ​တွေ့ရင်း​တောင်းပန်​စကား​ပြောပါရ​စေလို့ ​ပြောလာ​တော့သူမရင်​ထဲကတိတ်​တဆိတ်​နာကျင်​ခဲ့ရ​သေးသည်​။ ဒါ​ပေမယ့်​ရှစ်​နှစ်​ဆို​သောအချိန်​က သူမကို လှပ​သောမာယာ​တွေနှင့်​ ဟန်​​ဆောင်​တတ်​​စေရန်​ သင်​​ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်​​လေသည်​ ။
ကမ္ဘာ​အေးဘုရားလမ်းမ​ပေါ်ရှိ Heart to Heart ဆိုသည့်​ပိုးထည်​နှင့်​ပွဲထိုင်​ဇာများ​ရောင်း​သောဆိုင်​ကိုသူတို့အတူတူဖွင့်​ ထားကြသည်​ဆို​တော့ ခင်​​လေးလည်းတစ်​ချိန်​ကျဆို​င်​လေးတစ်​ဆိုင်​ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် အတူတူနေထိုင်လုပ်ကိုင်ရသည့် ဘဝကို သူနှင့်​​အေးချမ်းစွာဖြတ်​သန်းဖို့​မျှော်​လင့်​ခဲ့မိဖူးတာကိုတိတ်​တဆိတ်​အရှက်​သည်းမိရပြန်​သည်​။ဒါ​ပေမယ့်​လဲ အတိတ်​ဟာအတိတ်​ဘဲမဟုတ်​လားလေ။ ရန်​ကုန်​မှာ​နေမယ့်​တစ်​လလုံးသူမမည်​သူနှင့်​မှမ​တွေ့ဘဲတိတ်​တဆိတ်​​နေခဲ့တာကိုက သူမရင်​ထဲ ဒဏ်​ရာအကင်းမ​သေ​သေး​ကြောင်း​သေချာခဲ့ရသည်ပဲ။
စီးနင်းလာသောကားက ​တောင်​ပတ်​လမ်း​တွေကိုတအိအိ​ကွေ့ပတ်​ရင်းခရီးဆုံးထိ​ရောက်​​အောင်​သွား​နေလေသည်။ မနက်ခင်းဆို သူမတာဝန်​ထမ်း​ဆောင်​ရမည့်​ ​ဆေးရုံရှိရာ ​တောင်​​ပေါ်မြို့​လေးကို​ရောက်​​တေ့ာမည်​ ။ ​အေးချမ်း​သော တိတ်​ဆိတ်​​သော ပတ်​ဝန်းကျင်​အသစ်​နှင့်​သူမ သဟဇာတဖြစ်​​အောင်​​နေထိုင်​ပြီး ဘဝရဲ့စာမျက်​နှာအသစ်​ကိုဖွင့်​လှစ်​ ရင်း အ​ရောင်​​ပြောင်းတတ်​​သောလူ​တွေရဲ့အ​​ကြောင်းတ​စေ့တ​စောင်း​ သင်​ယူရ​ပေဦးမည်​ ။
တကယ်​​တော့ မိုးမည်း​တွေကဟန်​​ရေးဆင်​​နေ​​ပေမယ့်​ မိုးတိမ်​ဖြူတို့သည်​လည်း မစဲဘဲ​ စွေရွာတတ်​သည်​မဟုတ်​လား ..... ။​
Written by အညို
Posted by Alex Aung at 10:15 PM 1 comment:
စိတ်ထက် ကိုယ်က မြန်နေတဲ့အခါ စိတ်ညစ်မနေနဲ့ (Premat...